အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများအကြားအပြန်အလှန်ထိန်းညှိမှုအတွက် mesocorticolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၀) - Your Brain On Porn
အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်ထိန်းညှိအတွက် mesocorticolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို (2010)
neuroscience Biobehav ဗျာစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဖေဖော်ဝါရီ 21, 2013 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
neuroscience Biobehav ဗျာဇန်နဝါရီ 2011; 35 (3): 498-515 ။
ဇွန် 23, 2010 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2010.06.004
Kimberly အေလူငယ်,* Kyle အယ်လ် Gobroggeနှင့် Zuoxin ဝမ်
စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုလေးနက်ရေတိုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအပေါ်ရေရှည်အကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။ အလားတူပင်အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်နှင့်ဘဝတစျလြှောကျလုံးလူမှု attachment များကိုလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများနှင့်ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းသည်အလွန်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ အောက်ပါပြန်လည်သုံးသပ် (အလွဲသုံးစားမှုဘုံမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအာရုံစိုက်, ဒီအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်အသေးစိတ်ဥပမာ, psychostimulants, opiates, အရက်နှင့်နီကိုတင်း) နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေ (ဥပမာ, မိခင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ပြဇာတ်, ရန်လိုခြင်းနှင့် Bond အပြုအမူတွေ) ။ ဒီအပြန်အလှန်အခြေခံအဆိုပါအာရုံကြောယန္တရားများအတွက် mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အလေးပေးအတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
keywords: မိခင်အပြုအမူ, လူမှုရေးပြဇာတ်, pair တစုံဘွန်း, ကျူးကျော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, မူးယစ်ဆေးစွဲ, psychostimulants, ကင်း, စိတ်ကြွဆေး, opiates, မော်ဖင်းအကိုက်, အရက်, mesolimbic, dopamine, နျူကလိယ accumbens, prefrontal cortex, ventral tegmental ဧရိယာ
တဦးတည်းဆင်းရဲသောသူကိုမိဘအုပ်ထိန်း (စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူမှုရေးအပြုအမူတွေအပေါ်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏လေးနက်အကျိုးဆက်များအလွယ်တကူသိသာများမှာHawley et al ။ , 1995; ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2002), လူ့ရန်လိုလုပ်ရပ်များ (Chermack et al ။ , 2008; Langevin et al ။ , 1982; Testa et al ။ , 2003), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ (Inciardi, 1994; Lejuez et al ။ , 2005) နှင့်အိမ်ထောင်ရေးမတည်ငြိမ်မှု (Kaestner, 1995) compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏။ အညီအမျှထင်ရှားလူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏အကာအကွယ်သဘောသဘာဝ (အနီးကပ်မိဘကလေးဆက်ဆံရေးအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်Kendler et al ။ , 2000), ကျန်းမာမိသားစုအဆောက်အဦများနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသက်တူရွယ်တူအုပ်စုများ (ခေါင်းလောင်း et al ။ , 2000; Ellickson et al ။ , 1999), ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဖို့အားနည်းချက်ပေါ်မှာ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအကြားအပြန်အလှန် interaction ကနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပေမယ့်အဲဒီအပြုအမူ interaction ကအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများအများအားဖြင့်မသိနိုင်သောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မျိုးစုံအာရုံကြောစနစ်များကိုခြော social- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်နှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူတွေကိုအခြေခံနေစဉ်တွင်, ထို mesocorticolimbic dopamine (DA) စနစ်နှစ်ခုအကြားအပြန်အလှန်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သော့ချက်အနေအထား၌တည်ရှိ၏။ T ကမိမိအမှုစနစ် DA နျူကလီးယပ် accumbens (NACC), medial prefrontal cortex (mPFC) နှင့် amygdala အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော forebrain ဒေသများဖို့ midbrain နှင့်စီမံကိန်းများ၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင်အစပြုဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်ပါဝင်ပါသည်။ Tမိမိအမြင့်မားထိန်းသိမ်းထားအာရုံကြော circuit ကိုသပ္ပါယ်အပြုအမူတွေများ၏ထုတ်လုပ်မှုရလဒ်, ဇီဝသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးမြား၏တာဝနျကိုတစ်ဦးဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍမှထင်နေသည် (ကယ်လီနှင့် Berridge, 2002; Ness နှင့် Berridge, 1997; Panksepp et al ။ , 2002), မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့လူမှုအပြုအမူအပါအဝင် (ဥပမာနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် monogamous မျိုးစိတ်နှင့်မိခင်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (Aragona et al ။ , 2006; Curtis et al ။ , 2006; Numan နှင့် Stolzenberg, 2009; လူငယ်တို့ et al ။ , 2008a) ။ တိုးမြှင့်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများသူတွေဟာသက်ဝင်နောက်ဆုံးမှာဒီ circuitry ပြောင်းလဲနေဖြင့်အပြုအမူကျော်သူတို့ရဲ့အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုတျသောအကြံပြုချက်မှဦးဆောင်ထားပါတယ်ကယ်လီနှင့် Berridge, 2002; Ness နှင့် Berridge, 1997; Panksepp et al ။ , 2002) ။ အမှန်စင်စစ်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးသိကြမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှသောထိတွေ့မှုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် NACC အတွက် DA neurotransmission မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများအထူးသဖြင့် VTA နှင့် NACC (သည်းခံပွောငျးလဲအတွက်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုထပ်ခါတလဲလဲပုံ 1()Berke နှင့် Hyman, 2000; ဟင်နရီ et al ။ , 1989; ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1995; ဟူ et al ။ , 2002; Nestler, 2004, 2005; ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997) ။ ဤရွေ့ကားရေတိုနှင့်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများ, အလှည့်အတွက်, (တိရစ္ဆာန်အမူအကျင့်များပြုပြင်မွမ်းမံRobinson နဲ့ Becker က, 1986), လူမှုရေးသဘာဝမြားအပါအဝငျ။
အဆိုပါ mesocorticolimbic dopamine (DA) system ပေါ်တွင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဘုံသက်ရောက်မှုသရုပ်ဖော်ရိုးရှင်းသောကာတွန်း။ တစ်ဦးက) အဆိုပါ mesocorticolimbic DA စနစ်နျူကလိယ accumbens (NACC) အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော forebrain ဒေသများဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ထိုစီမံကိန်းတွင် DAergic ဆဲလ်ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ Basal ပြည်နယ်အတွက်, DA တစ်အခြေခံအဆင့် (အနက်ရောင်စက်ဝိုင်း) အ synapses အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မတူကွဲပြားသောယန္တယားမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း B က), အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးသိကြမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှသောထိတွေ့မှုကတော့ NACC အတွက် DAergic ဂီယာတိုးပွါး (di Chiara et al ။ , 2004) ။ Psychostimulants (ထို NACC တည်ရှိသော DAergic ဆိပ်ကမ်းပေါ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်ဤမျှကိုတိုက်ရိုက်ပြုပါAmara နှင့် Kuhar, 1993; ကြမ်းပြင်နှင့် Meng, 1996; ဂျုံးစ် et al ။ , 1998; Khoshbouei et al ။ , 2003) ။ Opiates VTA DA အာရုံခံ (များ၏ disinhibition အတွက်ရရှိလာတဲ့သည် VTA အတွက် GABAergic interneurons ဟန့်တားသဖြင့်ဒါသွယ်ဝိုက်ပြုပါDevine et al ။ , 1993; Gysling နှင့်ဝမ်, 1983; ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992; Kalivas et al ။ , 1990; မဿဲနှင့်ဂျာမန်, 1984) ။ အတော်များများကယန္တရားများ VTA DA အာရုံခံ (များ၏ disinhibition အပါအဝင်အရက်များအတွက်အဆိုပြုထားပြီHerz, 1997) ။ နီကိုတင်း (အသီးသီး mesocorticolimbic DA အာရုံခံ innervate ကြောင်း mesocorticolimbic DA အာရုံခံသို့မဟုတ် glutamatergic ဆိပ်ကမ်းပေါ်နီကိုတင်း cholinergic receptors ၏ဆွတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် NACC DA တိုးမြှင့်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်Balfour, 2009; Wonnacott et al ။ , 2005) ။ တိုက်ရိုက် / သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုအစိုင်အခဲ / တွေက dotted လိုင်းများအားဖြင့်ပုံဆောင်သည်နေကြသည်။ ကို C) ​​အလွဲသုံးစားမှုအများစုမူးယစ်ဆေးဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက် VTA အာရုံခံ (အရွယ်အစားလျော့Nestler, 2005; Sklair-Tavron et al ။ , 1996) ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ psychostimulant သို့မဟုတ်နီကိုတင်းထိတွေ့မှု (NACC အာရုံခံအတွက် dendritic outgrowth inducesဘရောင်းနှင့် Kolb, 2001; မက်ဒေါ်နယ် et al ။ , 2005; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2001; Robinson နဲ့ Kolb, 1997), ပုံအဖြစ်။ သို့သော်ထပ်ခါတလဲလဲ opiate ထိတွေ့မှု (ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002; Robinson နဲ့ Kolb, 1999) ။ အခြားသက်ရောက်မှုများ NACC အတွက် Basal DA အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ပြီးစီးပွားရေးနှိုးဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရေး (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်ဖိအား) (မြှင့်တင်ရန်အပါအဝင်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant ထိတွေ့ပြီးနောက်မှတ်ချက်ချခဲ့ကြပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997).
အောက်ပါပြန်လည်သုံးသပ်တှငျကြှနျုပျတို့ (ရောနှောလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု / အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအကြားဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြန်အလှန်ဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်စားပွဲတင် 1) ။ ကျွန်တော်တို့သည်မိခင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ပြဇာတ်အပေါ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုအပေါ်ရန်လိုခြင်းနှင့် Bond အပြုအမူတွေကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးမှု (psychostimulants များ၏သက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာ, ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး (AMPH), နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျစိတ်ကြွဆေးနှင့် methlyenedioxy စိတ်ကြွဆေး (MDMA)), opiates (ဥပမာ, ဘိန်းဖြူနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရက်နှင့်နီကိုတင်းကဲ့သို့သောအခြားသာမန်စော်ကားမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ တစ်ဦးချင်းစီအပြုအမူအတွက် mesocorticolimbic DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဒီစနစ်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲအပြုအမူအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုဖို့သက်သေသာဓကဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ၏သက်ရောက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက်အပေါ်ခိုင်မာတဲ့လူမှုရေး attachment များကို၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီလေ့လာမှုများဆှေးနှေးပါမညျ။
1 ။ မိခင်အပြုအမူ
1.1 ။ မိခင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
parturition ပြီးနောက်မိခင်အပြုအမူများ၏ Display ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အနှံ့ပင်ကိုစရိုက်ကလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်အတော်လေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, သေးလေ့လာမှုများအမျိုးမျိုးက၎င်း၏သမာဓိရှိအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်စိတ်မချရသောနိုင်သရုပ်ပြပါပြီ။ ထိန်းချုပ်ထားလူ့လေ့လာမှုများမှာတော့မိခင်အပြုအမူတွေအပေါ် psychostimulant နှင့် opiate စွဲနှစ်ဦးစလုံး၏ deleterious သက်ရောက်မှုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖြစ်စေ type ကိုစော်ကားသူကိုအမျိုးသမီးများနေ့ (မိမိတို့၏မွေးကင်းစကလေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်လျော့နည်းအချိန်ကုန်Gottwald နှင့် Thurman, 1994), (မိခင်-မွေးကင်းစကလေး interaction ကနေစဉ်အတွင်းသိသိသာသာလျော့နည်းစိတ်အားထက်သန်မှုပြသဘန်း et al ။ , 1997), နှင့်အနုတ်လက္ခဏာမိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူတွေ၏အဆင့်မြင့်ပြသ (ဂျွန်ဆင် et al ။ , 2002) နှင့်လျော့နည်းခြုံငုံမိဘပါဝင်ပတ်သက်မှု (Suchman နှင့် Luthar, 2000) Non-မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားအမျိုးသမီးတွေထက်။ ထို့အပြင် parturition ပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်လက်သူကိုမိခင်များမူးယစ်ဆေးအခမဲ့ကျန်ရစ်တဲ့သူမိခင် (ထက်လျော့နည်းမိခင်တုန့်ပြန်ပြသဂျွန်ဆင် et al ။ , 2002; Schuler et al ။ , 2000) နှင့်ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့သားသမီးဆီသို့လျစ်လျူရှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်အခါများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းသရုပ်ပြ (Hawley et al ။ , 1995) ။ ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားလေ့လာမှုများမိခင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လေးနက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများ-အပါအဝင်လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းအတွင်းအချက်များ confounding psychopathologies preexisting နှင့်ပါဝင်သူ polydrug ကခက်ခဲတိကျတဲ့မူးယစ်ဆေးဒါမှမဟုတ်လေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူရလဒ်များမှမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ယာယီပုံစံများ၏အလှူငွေအနက်ကိုဘော်ပြမှအသုံးပြုမှု-ပါစေ။
Nonhuman မျောက် (Schiorring နှင့် Hecht, 1979) နှင့်ကြွက်မော်ဒယ်များကိုပိုမိုထိန်းချုပ်အခြေအနေများအောက်တွင်မိခင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏အများစုသည် (opiate များ၏နှောင့်အယှက်သက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတံတားများနှင့် Grimm, 1982; Grimm နှင့် Bridges, 1983; Mayer et al ။ , 1985; Slamberova et al ။ , 2001), AMPH (Frankova, 1977; Piccirillo et al ။ , 1980), စိတ်ကြွဆေး (Slamberova et al ။ , 2005a, 2005b), နှင့်ကိုကင်း (Febo နှင့်ကူးတို့, 2007; Johns et al ။ , 1994; Kinsley et al ။ , 1994; Vernotica et al ။ , 1996; Vernotica et al ။ , 1999; Zimmerberg နှင့် Gray, 1992pup ပြန်လည်ရယူခြင်း, pup ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ / ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်အသိုက်အဆောက်အဦအပြုအမူအပါအဝင်လေ့ကဒီမျိုးစိတ်အားဖြင့်ပြသတက်ကြွသော, လှုံ့ဆော်မိခင်အပြုအမူတွေအပေါ်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းနှင့် / သို့မဟုတ် parturition ပြီးနောက်) ထိတွေ့မှု (Numan နှင့် Stolzenberg, 2009) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ရကာလတိုပေါ်တွင်ပထမဆုံးအာရုံစိုက်ဤလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, အဲဒီနောက်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက် (ရေကာတာ) တွင်ဤမိခင်အပြုအမူတွေအပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအမျိုးမျိုးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမကြာမီအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းညွှန်ပြကြသည်။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း AMPH သို့မဟုတ်ကင်းထိတွေ့ဆည် (ဆား-ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာခွေးများနှင့် / သို့မဟုတ်လျှော့ချအသိုက်အဆောက်အဦအပြုအမူတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးပြန်လည်ရယူရန်, တိုးမြှင့ latency လျော့ချ pup ကိုလျက်သရုပ်ပြFrankova, 1977; Piccirillo et al ။ , 1980; Zimmerberg နှင့် Gray, 1992) ။ ကိုယ်ဝန်တစ်လျှောက်လုံးနှင့်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလချို့ယွင်းအသိုက်အဆောက်အဦအပြုအမူစဉ်အတွင်းအလားတူပင်ကင်းထိတွေ့မှုများနှင့်ထုတ်ယူနှင့်အုပ်စုဖွဲ့ခွေးများ (ထိုအမျိုးသမီး၏ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသွားKinsley et al ။ , 1994; Vernotica et al ။ , 1996) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကိုကင်း microinfusion အဖြစ်တိုက်ရိုက် medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) သို့, ဦးနှောက်ဒေသ-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နှင့်မိခင်အပြုအမူအတွက်အဘက်ဘက်မှပါဝင်ပတ်သက် NACC-နှစ်ခုဒေသများစေခြင်းငှါ (Numan နှင့် Stolzenberg, 2009) အခြိနျမ caudate putamen (က CP) သို့မဟုတ် dorsal hippocampus, ချို့ယွင်း pup ပြန်လည်ရယူခြင်းသို့ (Vernotica et al ။ , 1999) ။ ဒါဟာ (မိခင်အပြုအမူတွေကိုမကြာမီဆေးထိုးပြီးနောက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည့်လေ့လာမှုများအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဆိုလိုသည်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးနေဆဲသွေးကြော / ဦးနှောက်) တွင်စည်းဝေးနေစဉ်။ ဒါကြောင့် (မိခင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများထိုကဲ့သို့သော locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ stereotypy ကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူတွေအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုမှအလယ်တန်းခဲ့ဖြစ်နိုင်Kunko et al ။ , 1998) ။ အမှန်စင်စစ်ဤအခြားအစီအမံစမ်းသပ်ပြီးသောလေ့လာမှုများ၏, အားလုံးနီးပါး drug- နှင့်ဆား-ကုသအုပ်စုများအကြား locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် / သို့မဟုတ် stereotypy မှတ်ချက်ချ (Frankova, 1977; Piccirillo et al ။ , 1980; Vernotica et al ။ , 1996; Vernotica et al ။ , 1999) ။ သို့သော်မိခင်အပြုအမူအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအငြင်းအခုံ (ပြောင်းလဲ locomotor အပြုအမူနှင့်ချို့ယွင်းမိခင်အပြုအမူများအကြားယာယီစိတ်တိုးပွားခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးဆိုလိုသည်မှာ, မိခင်အပြုအမူတွေ) locomotor လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်ပြန်ရောက်ပြီးမှနှောင့်အယှက်ကျန်ရစ် (Vernotica et al ။ , 1999).
မိခင်အပြုအမူအတွက်သိသာထင်ရှားသောပြတ်တောက်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏စူးရှသောအဆင့်ထက်ကျော်လွန်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက်ကိုယ်ဝန်တစ်လျှောက်လုံးကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးနဲ့ကုသပြီးတော့ခွေးများလျော့နည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့် / သို့မဟုတ်ဆောင်ဖို့အတွက် peripartum ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကနေဆုတ်ခွာနှင့်ဆား-ကုသထက်အသိုက်ဆောက်လုပ်ဖို့နှင့် / သို့မဟုတ်အသိုက်အားလုံးကိုခွေးများ retrieve မှမဟုတ်တော့ latency ပြသ အမျိုးသမီးအမျိုးမျိုးသောကိုရွှေ့ဆိုင်အချိန်အချက်များမှာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ (Johns et al ။ , 1994, 1997b; Slamberova et al ။ , 2005b) ။ ထို့အပြင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထပ်ခါတလဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး (အသီးသီးခွေးများ retrieve ဖို့အောင်းနေချိန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် postnatal ရက်ပေါင်း 12 သို့မဟုတ် 23 အပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အခါအပြုအမူကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့နှင့်မြောကျမတို့လျော့နည်းသွားSlamberova et al ။ , 2001) ။ ကိုကင်းကိုယ်ဝန်မီနှင့်အမူအကျင့်ာင်းသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောတစ် regimen (မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါကဤဆိုးကျိုးများမှမတူဘဲ, မိခင်အပြုအမူတိုးမြှင့်ခဲ့သည်ဆိုလိုသည်မှာထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအပျေါမှာ stereotypies သို့မဟုတ်ယေဘုယျရွေ့လျား၏, exacerbation) (Febo နှင့်ကူးတို့, 2007) ။ ဤလေ့လာမှု၌, ကညာအမျိုးသမီး 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုကင်း၏ (ip) ထိုးဆေး, အမူအကျင့်ာင်းအတွက်ရလဒ်တစ်ခုကုသမှုပါရာဒိုင်း intraperitoneal နေ့စဉ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ အဲဒီနောကျ, အမြိုးသမီး5နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်လိင်-အတွေ့အကြုံရှိအထီးနှင့်အတူသျောနှင့်ကိုယ်ဝန်နှင့်ကိုရွှေ့ဆိုင်ရက်ပေါင်း 1-2 တလျှောက်လုံးဘေးလွတ်သော left ခဲ့ကြသည်။ ကိုရွှေ့ဆိုင်ရက်ပေါင်း 3-4 အပေါ်မိခင်အပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းကိုကင်း-sensitized ဆည်အတွက်တိုးမြှင့်မိခင်အပြုအမူကိုညွှန်း, ရှိသမျှခွေးများ retrieve ဖို့တိုတောင်းအောင်းနေချိန်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒါဟာ (ဤလေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုမိခင်အပြုအမူတွေအပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အချိန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာ,) မတိုင်မီသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သာအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုမှာမှတ်ချက်ချခဲ့သည့်ကိုကင်းထိခိုက်မခံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, (ဤကိစ္စတွင်ခွေးများအတွက်သဘာဝမက်လုံးပေးရှာအံ့သောငှါဖို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးလာကြပါပြီနိုင်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်Febo နှင့်ကူးတို့, 2007) ။ "လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive" ၏ဤအယူအဆနောက်ပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
conditional ရာအရပျ preference ကို Paradigm များအသုံးပြုမှုမိခင်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများပိုမို Lucid အနက်များအတွက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ဂန္အေးစက်အပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ conditional ရာအရပျ preference ကို (ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်မူလတန်းစစ်ကူ (ခြွင်းချက်မရှိနှိုးဆွ) နှင့်အတူတွဲထားပြီးတဲ့ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအခြေအနေတွင် (အေးစက်နှိုးဆွ) များအတွက်ဦးစားပေး, ရောင်ပြန်ဟပ်Bardo နှင့် Bevins, 2000) ။ ဒီပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခြင်း, ကိုကင်းကိုရွှေ့ဆိုင်အမျိုးသမီးကြွက်များအတွက်အစွမ်းထက်စစ်ကူဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်အဆင့်စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါ, အမျိုးသမီးကြွက်များအလွယ်တကူ (ဆား-တွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာ cocaine- ပေမယ့်မ conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်Seip et al ။ , 2008) ။ အရေးကြီးတာက, ခွေးများလည်းအစွမ်းထက်စစ်ကူဖြစ်ကြသည်။ မိခင်အမျိုးသမီးအလွယ်တကူ (pup-ဆက်စပ်အခန်းများမှ conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်Wansaw et al ။ , 2008) နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ-စာနယ်ဇင်းကနျ့သို့မဟုတ်ပင်ခွေးများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်လျှပ်စစ်ဇယားကွက်ကိုကူးကြလိမ့်မည် (Lee က et al ။ , 1999) ။ ခွေးများနှင့်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများမကြာသေးမီကမိခင်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့အမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း pup- နှင့်ကိုကင်း-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ရန် dual-ရွေးချယ်မှု conditional ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့် (ထိုကင်းမိခင်လှုံ့ဆျောမှုအယှက်နှင့်ဤချို့ယွင်းသည့်ကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားအကြောင်းပြသထားသည်Mattson et al ။ , 2001; Seip နှင့် Morrell, 2007) ။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နှောင်းပိုင်းကရွှေ့ဆိုင်ပေးရန်ဆည်ဟာကိုကင်း-ဆက်စပ်အခန်းထဲကပိုမိုနှစ်သက်နေချိန်တွင်အထူးသအစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ဆည်, တစ်ဦးကိုကင်း-ဆက်စပ်အခန်းထဲကကျော်တစ်ဦး pup-ဆက်စပ်အခန်းထဲကပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဤရလဒ်သည် (အခြားနေရာများတွင်သရုပ်ပြအဖြစ်အစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလ၌ရေကာတာများ, မိခင်လှုံ့ဆျောမှု၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိသည်ညွှန်ပြWansaw et al ။ , 2008), နေစဉ်အတွင်းနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နှောင်းပိုင်းကရွှေ့ဆိုင်ပေးရန်ဆည်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။
1.2 ။ mesocorticolimbic DA ၏အခန်းက္ပ
မိခင်အပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးချို့ယွင်းအခြေခံသည့်ယန္တယားသို့တိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှားပါးခဲ့သည်။ သို့သော်သွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားအမျိုးမျိုးအတွက် mesocorticolimbic DA စနစ်ကိုပြောင်းလဲပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဒါကသက်သေအထောက်အထားမိခင်အပြုအမူတွေအတွက် mesocorticolimbic DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဒီ circuitry အတွက်သွေးဆောင်ရကာလတိုနှင့်ကာလရှည်ကိုပြောင်းလဲဖော်ပြစာပေ၏ကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်အသေးစိတ်မျိုးစုံလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အဓိကအားထား။ အဆုံးစွန်သောခေါင်းစဉ်ကဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် (တခြားနေရာကျယ်ကျယ်အကျဉ်းချုပ်ထားပြီးအဖြစ်di Chiara, 1995; di Chiara et al ။ , 2004; Hyman et al ။ , 2006; Koob နှင့် Nestler, 1997; Kuhar et al ။ , 1991; Nestler, 2005; ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; သောမတ်စ် et al ။ , 2008; အဖြူနှင့်အ Kalivas, 1998), ကျနော်တို့မိခင်အပြုအမူအတွက် mesocorticolimbic DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်းသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်ပထမဦးဆုံးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါကျနော်တို့မိခင်အပြုအမူနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်အကြောင်းအရာအထူးသမိခင်ဆည်အတွက်ဒီ DAergic circuitry အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စတင်ကြပြီမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ, ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ mesocorticolimbic DA system ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်မှုမြင်ဘို့လှုံ့ဆော်မိခင်အပြုအမူတွေ ((ထိန်းညှိတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်အတွက်အဘက်ဘက်မှပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ထင်နေသည်Numan နှင့် Stolzenberg, 2009)) ။ DA (ထို NACC သို့ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်Hansen et al ။ , 1993) နှင့် mPFC (Febo နှင့်ကူးတို့, 2007) မိခင်ကြွက်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်သို့မဟုတ်လှကျြ / သတို့သားခွေးများ (အခါ,ရှမ်ပိန် et al ။ , 2004), နှင့် NACC DA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (Keer နှင့် Stern ပာ, 1999) သို့မဟုတ် mPFC ၏တွေ့ရှိရပါသည် (Afonso et al ။ , 2007) အပြုအမူမြောကျမတို့ / ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ disrupts ။ သိုက်အဆောက်အဦဖွယ်ရှိ (ကိုရွှေ့ဆိုင်ရေကာတာအားဖြင့်ယုတ်ညံ့အသိုက်၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် VTA ရလဒ်များကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဖြစ်, VTA activation ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်Gaffori နှင့် Le Moal, 1979) ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုများအမျိုးမျိုးအတွက် VTA, NACC နှင့် mPFC အားလုံးပုံမှန် pup ပြန်လည်ရယူခြင်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျအရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မိခင်အပြုအမူကာလအတွင်း Real-time လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာရန်အနေနဲ့ electroencephalogram (EEG) သုံးပြီးကလှုပ်ရှားမှု (pup ပြန်လည်ရယူခြင်းစဉ်အတွင်း VTA နှင့် mPFC အတွက်တိုးပွါးပြသထားသည်ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez et al ။ , 2005) ။ အကျိုးဆက်နှစ်ခုလုံး VTA inactivation (Numan နှင့် Stolzenberg, 2009) နှင့် mPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Afonso et al ။ , 2007) ကိုရွှေ့ဆိုင်ကြွက်များတွင် pup ပြန်လည်ရယူခြင်းနှောက်ယှက်။ pup ပြန်လည်ရယူခြင်းအပေါ်အလားတူနှောင့်အယှက်သက်ရောက်မှုများ VTA သို့မဟုတ် NACC အတွက် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက်မှတ်ချက်ချခဲ့သည်အတိုင်းဤအကျိုးသက်ရောက်ဖွယ်ရှိ (ဤဒေသများအတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်Hansen, 1994; Hansen et al ။ , 1991). အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှု mesocorticolimbic DA စနစ်ကမိခင်အပြုအမူများ၏ Display ကိုအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကဖော်ပြသည်။
ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့် NACC အတွက် DA အဲဒီ receptor ကို Activation, မိခင်အပြုအမူတွေ၏ display ကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းကောင်းမွန်စွာလက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် (Keer နှင့် Stern ပာ, 1999), တိကျတဲ့အဲဒီ receptor Subtype များ၏အလှူငွေအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေဆဲပင်။ နှစ်ခု DA receptors ၏အဓိကမိသားစုများ, D1 ကဲ့သို့ receptors (D1R) နှင့်အချို့သောအပြုအမူတွေအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအတွက်ကွာခြားကြောင်း D2 ကဲ့သို့ receptors (D2R) သည်, NACC အတွင်း၎င်းတို့၏ခန္ဓာဗေဒဖြန့်ဖြူးခြင်း, intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သူတို့သက်ရောက်မှု (ရှိပါတယ်ထောင့်ကွက် 1; ပုံ 2()Missale et al ။ , 1998; Neve et al ။ , 2004; Sibley နှင့် Monsma, 1992) ။ R ကိုမိခင်အပြုအမူအတွက်ဤအဲဒီ receptor Subtype ၏ဆွေမျိုးအရေးပါမှုသို့ ecent စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပဋိပက္ခဖြစ်ရလဒ်လြှော့ထားပါတယ်s ကို။ တဦးတည်းလေ့လာမှု, SCH23390 တစ် D1R ရန်၏ NACC ဆေးထိုး, ဒါပေမယ့်မရ eticlopride တစ် D2R ရန်အတွက်, အမျိုးမျိုးသောကိုရွှေ့ဆိုင်အချိန်တွင်ရမှတ် (ပုံမှန် pup ပြန်လည်ရယူခြင်းနှောင့်အယှက်Numan et al ။ , 2005), တစ်ဦး D1R များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ, ဒါပေမယ့်မရ D2R, ဒီအပြုအမူအတွက် activation အကြံပြုခြင်း။ သို့သော်အခြားလေ့လာမှုအတွက် NACC D2R ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (အဖြစ်ကောင်းစွာမိခင်အပြုအမူအတွက် D2R activation များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, pup ပြန်လည်ရယူခြင်းနှောင့်အယှက်ဆေးလ်ဗား et al ။ , 2003).
အဆိုပါ NACC အတွင်း DA neurotransmission ၏ရှုပ်ထွေး
DA receptors ငါးခုအဓိကမျိုးကွဲ D1-, D2-, D3-, D4- နှင့် D5-receptors, ယနေ့အထိခွဲခြားပြီ, ဤ Subtype မကြာခဏနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်ရာနှစ်ခုကိုအဓိကမိသားစုများ, D1 ကဲ့သို့ receptors (D1R), သို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည် အဆိုပါ D1- နှင့် D5-receptor Subtype, နှင့် D2-, D2- နှင့် D2-receptor Subtype ပါဝင်သည်ရာ D3 ကဲ့သို့ receptors (D4R), (Missale et al ။ , 1998; Neve et al ။ , 2004) ။ နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor မိသားစုများကဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ် NACC အတွက်ဖြန့်ချိ DA (D1Rs သို့မဟုတ် D2Rs ဖြစ်စေဖို့ခညျြနှောငျစခွေငျးငှါCooper က et al ။ , 2003) နှင့်လေ့လာမှုများအမျိုးမျိုး NACC D1R activation, D2R activation, ဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့အပြုအမူတွေအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor အမျိုးအစားများတွင်တစ်ပြိုင်တည်း activation ၏အရေးပါမှုကိုသရုပ်ပြပါပြီ။ များစွာသောအမှုများမှာ NACC အတွင်း D1R နှင့် D2R activation အပြုအမူအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤဖြစ်စဉ် (လူမှုရေးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006) နှင့်မူးယစ်ဆေး-related (ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996) အပြုအမူတွေ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အမူအကျင့်အပေါ် DA အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှု, D1Rs နှင့် D2Rs အဆိုပါ NACC အတွင်းနှင့် / သို့မဟုတ် intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းနှင့်ဆယ်လူလာ activation အပေါ် D1R နှင့် D2R activation ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများဖြန့်ဖြူးအတွက်ခြားနားချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ NACC အတွက်အာရုံခံ၏အများစုသည်ဂါဘမြို့သားထုတ်လုပ်အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) များမှာ (Meredith, 1999). ဤရွေ့ကားအာရုံခံသူတို့စီမံကိန်းနယ်ပယ်များတွင်ကွာခြားကြောင်း subpopulations, သူတို့ရဲ့ neurochemical phenotypes, သူတို့ဖော်ပြကြောင်း DA အဲဒီ receptor အမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် (Gerfen et al ။ , 1990; Surmeier et al ။ , 2007). D1Rs အဓိကအားထိုကဲ့သို့သော VTA အဖြစ် midbrain ဒေသများမှပရောဂျက်တစ်ခုကို MSNs ပေါ်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျက်, endogenous opioid dynorphin ထုတ်လုပ်နေကြ. D2Rs အစား, အဓိက ventral pallidum နှင့် subthalamic နျူကလိယမှပရောဂျက်တစ်ခုကို MSNs အပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့် endogenous opioid enkephalin ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်အချို့ MSNs နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor အမျိုးအစားများကို Co-ဖော်ပြကြောင်းမှတ်သားရပါမည် (Lee က et al ။ , 2004). ထို့အပြင် autoreceptors အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြောင်း D2Rs အဆိုပါ NACC အတွင်းမှာလည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြပြီး DAergic ဆိပ်ကမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်တည်ရှိသည် (Khan က et al ။ , 1998). ကြောင့် NACC (autoreceptor vs. Post-Synaptic အဲဒီ receptor) အတွင်း D1Rs နှင့် D2Rs နှင့် DA receptors ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍဖော်ပြ MSNs ၏ကွဲပြားခြားနားသောအနာဂတ်လယ်ကွင်း, သောဦးနှောက်၏ကွဲပြားဒေသများတွင်အပြောင်းအလဲများကိုဤဒေသခဲထဲမှာ DA receptors ၏ activation မှ အပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။
D1Rs နှင့် D2Rs ၏ activation အချို့ intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသော်လည်း 'အသိသိ adenosine3၏စည်းမျဉ်း differential စေပါတယ်, 5'-monophosphate (Camp) intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်း (Missale et al ။ , 1998; Neve et al ။ , 2004ဒါကြောင့် (လူမှုရေးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးအဖြစ်လက်ရှိခေါင်းစဉ်အထူးစိတျဝငျစားကြောင်း), တစ်လမ်းAragona နှင့်ဝမ်, 2007) နှင့်မူးယစ်ဆေး-related (Lynch နှင့်တေလာ, 2005; ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1998) အပြုအမူတွေ။ D1Rs နှင့် D2Rs အတိုက်အခံသူတို့အပြန်အလှန်အရာတွေနဲ့ G-ပရိုတိန်း၏ alpha subunits မှတဆင့်အဆငျ့ဆငျ့အချက်ပြတပ်ကိုထိန်းညှိ (ပုံ 2()Missale et al ။ , 1998; Neve et al ။ , 2004).
D1Rs-ရာ, G-ပရိုတိန်း stimulatory မှ coupled နေကြသည်၏အတိုချုပ်, activation (Gαs နှင့်Gαolf ) adenylyl cyclase (AC), ဒုတိယတမန်စခန်းနှင့်ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) activation တစ်ခုတိုးလာ၏ထုတ်လုပ်မှုတိုး၏ activation မှ -leads ။ Active ကို PKA ဗီဇကူးယူဖို့ဦးဆောင်ကူးယူအချက်များနှင့် depolarizing အိုင်းလိုင်းများ phosphorylates နှင့်အသီးသီးဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
D2Rs-ရာ inhibitory, G-ပရိုတိန်းမှ coupled နေကြသည်၏အစား, activation (Gαi နှင့်Gαo) AC အ activation, စခန်းထုတ်လုပ်မှု, PKA လှုပ်ရှားမှုနှင့်၎င်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းသက်ရောက်မှု -inhibits ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထို့ပြင် D1Rs နှင့် D2Rs ပေမယ့်အစဉ်အလာသစ်ကိုသက်သေအထောက်အထားသည်ဤ receptors intracellular အချက်ပြပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်စေခြင်းငှါအကြံပြု, intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်လွတ်လပ်သောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး D1Rs နှင့် D2Rs ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ဆဲလ်များတွင်ဤ receptors intracellular အချက်ပြပေါ်မှာထူးခြားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိသည်သောရှုပ်ထွေးသောအချက်ပြ heteromeric D1-D2 dopamine အဲဒီ receptor ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ် (Rashid et al ။ , 2007) ။ အတူတကွခေါ်ဆောင်သွားမျိုးစုံ DA အဲဒီ receptor Subtype ၏တည်ရှိမှုသည် NACC အတွင်း၎င်းတို့၏ differential ကို neuroanatomical တည်နေရာနှင့်အတူ coupled နှင့် intracellular အချက်ပြမှာမိမိတို့ differential ကိုသက်ရောက်မှုများ NACC အတွင်း DA neurotransmission ၏ရှုပ်ထွေးမီးမောင်းထိုးပြ။
Dopamine receptors differential (Camp intracellular အချက်ပြခြင်းနှင့်ဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိMissale et al ။ , 1998; Neve et al ။ , 2004) ။ D1 ကဲ့သို့ receptors (D1R) stimulatory, G-ပရိုတိန်းနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည် (Gαs နှင့်Gαolf) activated သောအခါ, အမြှေးပါးခညျြနှောငျအင်ဇိုင်း adenylyl cyclase (AC) ၏လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်း။ Active ကို AC အပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) ၏ activation နှင့် (ထိုကဲ့သို့သောသိသိ amp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်အဖြစ်ကူးယူအချက်များ၏ phosphorylation မှတဆင့် binding ပရိုတိန်း (CREB)) မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာနောက်ဆက်တွဲတိုးမှဦးဆောင်သည့်တပ်သို့ ATP ၏ပြောင်းလဲခြင်း, catalyzes နှင့်ဆယ်လူလာ (အိုင်းလိုင်းများ depolarizing ခညျြနှောငျအမြှေးပါးများ၏ phosphorylation တဆင့်) လှုပ်ရှားမှု။ အစား, inhibitory, G-ပရိုတိန်းမှ coupled နေကြသည် D2 ကဲ့သို့ receptors (D2R), (Gαi နှင့်Gαo) ။ D2Rs activated ကြသောအခါ, ဤမှာ G-ပရိုတိန်း၏ alpha subunit စခန်းထုတ်လုပ်မှု, PKA လှုပ်ရှားမှု, မျိုးဗီဇစကားရပ်နှင့်ဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားဖို့ဦးဆောင် AC အများ၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ တစ်ဦး bar မှာအဆုံးသတ်တွေက dotted လိုင်းများ inhibitory သက်ရောက်မှုညွှန်ပြနေချိန်တွင်တစ်ဦး arrowhead အတွက်အဆုံးသတ်အစိုင်အခဲလိုင်းများ, stimulatory သက်ရောက်မှုဖော်ပြသည်။
မိခင်အပြုအမူအတွက် mesocorticolimbic DA ၏သိသာထင်ရှားသောပါဝင်ပတ်သက်မှု (မိခင်အပြုအမူအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှု DA neurotransmission အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ hypothesize မှသုတေသီများဦးဆောင်Vernotica et al ။ , 1996; Vernotica et al ။ , 1999). အမှန်စင်စစ်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးသိကြမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် mesocorticolimbic DAergic neurotransmission နှင့် VTA, NACC နှင့် mPFC အတွက်ရေရှည်တည်တံ့အလိုက်အထိုက်နေတတ်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရလာဒ်များကိုသက်ဝင် (Koob, 1992; Nestler, 2005အဘယ်သူ၏ပုံမှန် function ကို, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, မိခင်အပြုအမူများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်) -brain ဒေသများ။ သို့သျောလညျးကိုတိုက်ရိုက်မိခင်အပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအခြေခံစေခြင်းငှါ၎င်းအာရုံကြောအလွှာစုံစမ်းစစ်ဆေးသုတေသနသာရုံစတင်နေပြီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာရန်, ကိုကင်းအပေါ်နီးပါးသီးသန့်အာရုံစူးစိုက်ထားသည်။
အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု (စူးရှ ip ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသွေးဆောင်ကြောင်းကညာအမျိုးသမီးနှင့်မိခင်နို့တိုက်ရေကာတာများအကြားဦးနှောက်ကို Activation ၏ differential ကိုပုံစံများထင်ရှားကူးတို့ et al ။ , 2005) ။ အပျိုကညာခုနှစ်တွင်ကင်းကုသ NACC နှင့် mPFC တစ်ဦးအပြုသဘောသွေးအောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) signal ကို inducing, mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများ activated ။ activation ဒီပုံစံ (အထီးကြွက်များတွင်မှတ်ချက်ပြုကြောင်းရန်အလွန်ဆင်တူသည်Luo အဘိဓါန် et al ။ , 2003) နှင့်အခြားမျိုးစိတ် (Breiter et al ။ , 1997) ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးမှ, နို့တိုက်ဆည်အတွက်ခွေးများအားဖြင့်သွေးဆောင်ပုံစံဖြစ်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, နို့တိုက်ဆည်ထဲမှာ ip ကိုကင်းကုသမှု (mPFC activation တစ်သိသာမရှိခြင်း, အ NACC အတွင်းတစ်ဦးခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲ activation, နှင့် mesocorticolimbic DA စနစ်ကတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးကြံ့ခိုင်အနုတ်လက္ခဏာ BOLD signal ကိုပြောင်းလဲမှုအတွက်ရလဒ်ကူးတို့ et al ။ , 2005), ကိုကင်းထိတွေ့မိခင်အပြုအမူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆည် lactating အတွက် DAergic အလွှာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေခြင်းငှါညွှန်ပြ။ အခြားလေ့လာမှု၌, နို့တိုက်ဆည်များ၏ mesocorticolimbic DA သည့်စနစ်အတွင်း pup-သွေးဆောင် activation ၏ပုံစံများအပေါ်ယခင်ကင်းအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ဝန်မတိုင်မီကင်းဖို့ sensitized အမျိုးသမီးသိသိသာသာလျော့နည်းဆား-ကုသဆည် (ထက် pup အပြန်အလှန်စဉ်အတွင်း mPFC အတွက် BOLD activation ပြသFebo နှင့်ကူးတို့, 2007) ။ ထို့ပြင်အဆိုပါ mPFC-အဖြစ် DA ၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်ဖြင့်တိုင်းတာ Vivo အတွက် ဦးနှောက်ဆား-ကုသဘာသာရပ်များထက်ကင်း-sensitized ဆည်ထဲမှာနိမ့် microdialysis-ခဲ့ကြသည်, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့သို့သော် pup-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရေး (အုပ်စုများအကြားဆင်တူခဲ့သည်Febo နှင့်ကူးတို့, 2007) ။ အရေးကြီးတာက, pup-သွေးဆောင်အာရုံခံ activation နှင့်အခြေခံ DA အဆင့်ဆင့်တွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မိခင်အပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုအမြဲတည်သောဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုနီးပါး 30 ရက်နောက်ဆုံးကိုကင်းဆေးထိုးပြီးနောက်စည်းဝေးကြ၏။ ဒီသက်သေအထောက်အထား mesocorticolimbic DA မြားတှငျပွောငျးလဲအမှန်ပင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါညွှန်ပြနေချိန်တွင်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမိခင်အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်သောတိကျတဲ့ယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
2 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
2.1 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုအသေးစိတ်ထိန်းချုပ်လေ့လာမှုများရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် Self-အစီရင်ခံစာလေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအလှနျယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ impact ကြောင်းသတိပြုပါ။ ရောနှောလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒ, ပိုကောင်းစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပျော်မွေ့တိုးလာနှင့် orgasm ပိုမိုပြင်းထန်လာ AMPH, MDMA နေဖြင့်သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြ, ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူအသုံးပြုသူများသည်အပါအဝင် Prosexual သက်ရောက်မှု, (el-Bassel et al ။ , 2003; Kall, 1992; McElrath, 2005; Rawson et al ။ , 2002) ။ Intriguingly ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆိုးကျိုးများကိုလည်းလေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စွဲလမ်း၏ကာလအတွင်းမှာလိင်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်း (အပါအဝင်အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်de Leon နှင့် Wexler, 1973; el-Bassel et al ။ , 2003; Mintz et al ။ , 1974; Weatherby et al ။ , 1992) ။ ဒီသက်ရောက်မှု၏ directionality မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစား, ဆေးထိုး, ကျား, မ, နှင့်စားသုံးမှုသမိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုးကျိုးများ၏မျှော်လင့်ချက်များအပါအဝင်အများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပုံရသည်။
စနစ်တကျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်အလွဲသုံးမှုများသတ်သတ်မှတ်မှတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိစေရန်, ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်ကြွက်အလုပ်ပါပြီ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ (နှစ်ဦးစလုံးအစာစားချင်စိတ်ကိုပြောင်းလဲဥပမာ, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒ) နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက် (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, သငျ့လျြောသောသုတ်ရည်ထိ), ရှုထောင့်နှင့်အလယ်ပိုင်းနှင့်အရံစနစ်များအပေါ်ပေါင်းစပ်လုပ်ရပ်များမှတဆင့်ဒါလုပ်ပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကို (အစာစားချင်စိတ်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကိုပြောင်းလဲအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက် mesocorticolimbic DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍကောင်းစွာထူထောင်ထားပြီးအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လှုံ့ဆော်မှု) ရှုထောင့်, (စာဖတ်သူ (သူတွေရဲ့စားသောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများတဲ့ဆွေးနွေးမှုများအတွက်တခြားနေရာရည်ညွှန်းPfaus et al ။ , 2009)) ။ အထီးကြွက်, အမျိုးသမီး-ညွှန်ကြားစုံစမ်းအပြုအမူတွေ (ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, sniffing ဖြီးလိမ်းပုံ), mount နှင့် intromit မှ latency, postejaculatory ကြားကာလတစ် bi-Level ယန္တရားထဲမှာအမျိုးသမီး၏ search အတွက်လုပ်ယောက်ျား၏အချိုးအစား copulate ရန်နှင့် conditional အဆင့်အပြောင်းအလဲများမကြာခဏ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်Everitt, 1990; Mendelson နှင့် Pfaus, 1989) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အစား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ဖွယ်ရှိနေသည်, နွှယ်သည်လည်းပျံတတ်သောနားလှုပ်လှုပ်ရွရွနှင့် PACE အပါအဝင် proceptive သို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းအပြုအမူတွေ၏ဖြစ်ပျက်မှုအားဖြင့် quantified နိုင်ပါသည်Erskine, 1989).
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့လာရေးချက်ချင်းကြိုတင်အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ပေးပို့သည့်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါပြသခဲ့ကြပါတယ်။ AMPH, MDMA နှင့်ကိုကင်းအပါအဝင် Psychostimulants, လိင်-အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတွင်ထိုး-မှီခိုလျှောက်လျော့နည်းထုတ်လုပ်ရန်။ ဤသည်ကျဆင်းခြင်း (မူးယစ်ဆေးကုသမှုအောက်ပါ anticipatory အဆင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်ယောက်ျားပေါင်း copulating ၏အချိုးအစားတစ်ခုလျှော့ချရေးအသုံးပြုပုံအဖြစ် postejaculatory ကြားကာလတစ်ခုတိုးခြင်းဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါသည်Bignami, 1966; Cagiano et al ။ , 2008; Dornan et al ။ , 1991; Pfaus et al ။ , 2009) ။ တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့သို့သော်ဤသက်ရောက်မှုအကြီးအကျယ်မူးယစ်ဆေးကုသမှုအားဖြင့်သွေးဆောင် locomotor activation နှင့် stereotypies ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဆနျ့ကငျြ, psychostimulant ထိတွေ့လိင်-ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် AMPH ကုသမှု (ကညာယောက်ျားအတွက်တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency လျော့ချAgmo နှင့်ကောက်ယူသူ, 1990) ။ proceptive နှင့်တောင်းခံခြင်းအပြုအမူတွေအတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုးနှင့်လျော့နည်းစေခြင်း (တိရိစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုသောမူးယစ်ဆေးများနှင့်ဟော်မုန်းအဆင့်အတန်းပေါ် မူတည်. တွေ့ပါပြီအဖြစ်အမျိုးသမီးများတွင်စူးရှသော psychostimulant ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ညီတူညီမျှရှုပ်ထွေးနေကြသည်Guarraci နှင့် Clark က, 2003; Guarraci et al ။ , 2008; ကိုင်ဆောင်သူ et al ။ , 2010; Pfaus et al ။ , 2009) ။ ရှေ့နောက်မညီမှုများအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်စိတ်ကျရောဂါ၏စူးရှသောသက်ရောက်မှုကိုရည်မှတ်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, anticipatory အဆင့်အပြောင်းအလဲများအတွက်တိုး (အရက်၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးအပြီးမှတ်ချက်ချခဲ့ကြစဉ်Ferraro နှင့် Kiefer, 2004), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပံ့ပိုးအကြံပြုအလားတူဆေးများ (ကလိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိတုံ့ပြန်အော်ပရေတာနှောင့်နှေးScott et al ။ , 1994), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းကိုညွှန်း။ နောက်ထပ်စူးရှသောမော်ဖင်းအကိုက်ထိုးသိသိသာသာ (တဦးတည်းလေ့လာမှုအတွက် sniffing မြောကျမတို့, လိုက်စားခြင်းနှင့် mounting အပါအဝင်အမျိုးသမီး-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ, တိုးမြှင့်မစ်ချယ်နှင့် Stewart က, 1990), ဒါပေမယ့်အခြားတွင်ဤသို့မဟုတ်အခြားအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ (Pfaus et al ။ , 2009).
ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအပြုအမူအရေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant ထိတွေ့-အထူးသဖြင့်ကုသမှု Paradigm ၏သက်ရောက်မှု၏စာမေးပွဲအတွက်, သို့သော်, အောင်မြင်ထားပြီး (Afonso et al ။ , 2009; Fiorino နှင့် Phillips က, 1999a, 1999b; Guarraci နှင့် Clark က, 2003; Nocjar နှင့် Panksepp, 2002) ။ စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးကုသမှု၏ချုပ်ရာအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမွဲတိုးမြှင့်ညွှန်ပြပြီ။ (ဥပမာတစျခုလေ့လာမှုမှာ, အထီးကြွက် AMPH ထိုး (ip) ၏အထိခိုက်မခံ regimen ပေးခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံး AMPH အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါသုံးပတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်Fiorino နှင့် Phillips က, 1999b) ။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့တှငျ AMPH-ကုသကညာအထီး mount နှင့် intromit မှသိသိသာသာတိုတောင်း latency ပြသသော်လည်း, locomotor လှုပ်ရှားမှုမရှိအပြောင်းအလဲများပြသ, AMPH ကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတိုးမြှင့်ကြောင်းညွှန်ပြ se နှုန်း။ ထို့ကြောင့် AMPH-ကုသကြွက်လည်း (နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့၌ဆား-ကုသကြွက်များထက်လိင်လက်ခံအမျိုးသမီး၏မျှော်လင့်အတွက်သိသိသာသာပိုပြီးအဆင့်ကိုအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်Fiorino နှင့် Phillips က, 1999b) ။ ထပ်ခါတလဲလဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း AMPH ထိတွေ့အထီး၏မျက်မှောက်၌ပြသမြှူဆွယ်တောင်းခံ, hops နှင့်လှံလက်နက်၏နံပါတ်စဉ်အတိုင်းတိုးတက်အလားတူတွေ့ရှိချက် (အမျိုးသမီးအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြAfonso et al ။ , 2009) နှင့် PACE မိတ်လိုက်အပြုအမူတွေစဉ်အတွင်းအထီးကိုပြန်သွားဖို့အောင်းနေချိန်လျော့နည်းသွား (Guarraci နှင့် Clark က, 2003) မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၏ချုပ်ရာအောက်ပါအထိသုံးပတ်သည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများ AMPH ထိတွေ့တဲ့အထိခိုက်မခံ regimen လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးဖို့မွဲ "လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive" ၌ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။
2.2 ။ mesocorticolimbic DA ၏အခန်းက္ပ
ကျနော်တို့ mesocorticolimbic DA မြားတှငျပွောငျးလဲအလွဲသုံးစားမှု psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုးမြှင့်အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ဆွေးနွေးရန်ဖို့ "လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive" ၏အယူအဆအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ (Robinson နဲ့ Berridge, 1993, 2008) (အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်) အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ကြောင်း postulates ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုံ့ဆော်မှုမှ salience တာဝန်ပေးဖို့များအတွက်တာဝန်ရှိအာရုံကြော circuitry ပွောငျးလဲ။ ဤရွေ့ကား neuroadaptations မူးယစ်ဆေးမက်လုံးမှစွပ်စွဲ salience နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာခြင်းငှါ, အရှင်တစ်ဦးရောဂါဗေဒလှုံ့ဆျောမှု၏ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်ရလဒ်။ အရေးကြီးတာကမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် neuroadaptations လည်းထိုကဲ့သို့သော sucrose အဖြစ်, သဘာဝစစ်ကူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်, သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ (Avena နှင့် Hoebel, 2003), အစားအစာ (Bakshi နှင့်ကယ်လီ, 1994), သို့မဟုတ်ဤအမှု၌, တစ်ဦးလိင်လက်ခံမိတ်ဖက် (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999b; Guarraci နှင့် Clark က, 2003).
အကဲဆတ်ခြင်း neurobiology အပေါ်လေ့လာရေးတခြားနေရာအသေးစိတ်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ် mesocorticolimbic DAergic အာရုံခံ, နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့အောက်ပါအကျူးနဲ့ post-Synaptic ပွောငျးလဲနှစ်ဦးစလုံးခံယူကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြ (ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; အဖြူနှင့်အ Kalivas, 1998) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွဲသုံးစားမှု psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှသောထိတွေ့မှု (ထို NACC အတွက် extracellular DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်နေစဉ်di Chiara et al ။ , 1993; Hurd နှင့် Ungerstedt, 1989), ဒီ DA တိုးသိသိသာသာ (ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (ကြောင့် DA axon ဆိပ်ကမ်းအတွက် DA အာရုံခံခြင်းနှင့်ပွောငျးလဲတိုးလှုပ်ရှားမှုနှစ်ဦးစလုံးမှ, psychostimulants နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုပြီးနောက်ရလဒ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997)) ။ ထို့အပြင် DA အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကို NACC D1R sensitivity ကိုတစ်ဦးမလြှော့တိုးမြှင့်အပါအဝင်အထပ်ထပ် psychostimulant အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြ (ဟင်နရီ et al ။ , 1989; ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1991, 1995; Simpson et al ။ , 1995) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ NACC နှင့် PFC အာရုံခံအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံအမြဲတည်သောလည်း (စိမျးနှင့် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆ, တိုးမြှင့ dendritic အရှည်အပါအဝင်ဖြစ်ပေါ်ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2001; Robinson နဲ့ Kolb, 1997).
အဆိုပါ mesocorticolimbic DA စနစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော psychostimulant-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကဒီဆွေးနွေးမှုမှအကျိုးစီးပွားဖြစ်ကြသည်။ DA (ကြိုတင်သုတ်ရည်ထိမှတစ်ဦးလိင်လက်ခံမိတ်ဖက်များ၏တင်ပြချက်အပျေါမှာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏ NACC သို့ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်Becker က et al ။ , 2001a; Pfaus et al ။ , 1990; Pfaus et al ။ , 1995) ။ ထို့အပွငျအမြိုးသမီးအတွက်, DA လွှတ်ပေးရေး (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွများ၏အရှိန်အဟုန်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်နေသည်Becker က et al ။ , 2001a; Mermelstein နှင့် Becker က, 1995) ။ ယောက်ျားအတွက်, NACC DA လျော့ကျ (လျော့ချ NACC DA လွှတ်ရာဆွစဉ်အခါ, အောင်းနေချိန် mount နှင့် intromit ရန်, တိုးတက်သေးတောင်ပေါ်နှင့် intromissions ၏နံပါတ်ပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့Everitt, 1990), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ် NACC DA neurotransmission တစ်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုကိုညွှန်း။ အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် DA အဲဒီ receptor activation ၏အရေးပါမှုကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။ haloperidol မှတဆင့် NACC DA receptors များ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို (NACC အတွက် DA receptors ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းညွှန်ပြနေတဲ့ bi-Level စမ်းသပ်ခြင်းယန္တရားမှအမျိုးသမီးများ၏နိဒါန်းမတိုင်မီ anticipatory အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများအရေအတွက်ကိုလျှော့ချPfaus နှင့် Phillips က, 1991) ။ D2R ပိတ်ဆို့တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency (တိုးလာအဖြစ် NACC အတွက် D2Rs ၏ activation, အထူးသဖြင့်အရေးပါမှု၏ဖြစ်နိုင်သည်Everitt, 1990), အ NACC အတွက်သို့သော်နောက်ထပ်အဲဒီ receptor တိကျတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစာစားချင်စိတ်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ DA receptors တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မိသားစုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအတည်ပြုရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အဆိုပါ VTA ၏လျှပ်စစ်ဆွအထီးကြွက်အတွက် intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် latency mount လျော့နည်းသွားအဖြစ် Mesocorticolimbic DA နောက်ထပ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးEibergen နှင့် Caggiula, 1973; Markowski နှင့် Hull, 1995), VTA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်တိုးလာနေချိန်မှာ postejaculatory ကြားကာလ (Brackett et al ။ , 1986).
အစာစားချင်စိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက် mesocorticolimbic DA ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ (ပေးထားEveritt, 1990; Melis နှင့် Argiolas, 1995), မူးယစ်ဆေးာင်းနဲ့ဆက်စပ် psychostimulant-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများတိုးမြှင့်အခြေခံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာသို့သော်တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည် (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999a) ။ ဤလေ့လာမှု၌, အထီးကြွက် AMPH ထိုး (ip) ၏အထိခိုက်မခံ regimen ပေးခဲ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်သုံးပတ်အကြာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ကာလအတွင်း microdialysis DA efflux တိုင်းတာဖို့ NACC အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ AMPH- နှင့်ဆား-ကုသကြွက်အကြား NACC DA ၏ Basal extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ တစ်ဦးလိင်လက်ခံအမျိုးသမီးမှနီးကပ်ထဲတွင်နေရာရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ DA လွှတ်ပေးရန် AMPH-sensitized ကြွက်များတွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ခွင့်ပြုသည့်အခါထို့အပြင်, AMPH-sensitized ကြွက်ဆား-ကုသကြွက်များထက် copulatory နမူနာမိပထမဦးဆုံး 10 စဉ်အတွင်း DA efflux အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လာပါသည်နှင့် mount မှသိသိသာသာတိုတောင်း latency ပြသ။ ဤရလဒ်သည် (ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးတုံ့ပြန်တိုးမြှင့် NACC DA လွှတ်ပေးရန် AMPH-sensitized ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအခြေခံစေခြင်းငှါညွှန်ပြFiorino နှင့် Phillips က, 1999a) ။ ထို့ကြောင့်, ရုံ Prime မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုး (psychostimulant-sensitized တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မြင့်မားသော DA efflux elicits အဖြစ်ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997), ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့တဲ့အထိခိုက်မခံ regimen လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးဖို့မွဲ "လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive" ၌ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဟူသောအယူအဆ supporting, တစ်ဦးလိင်လက်ခံအမျိုးသမီးမှထိတွေ့မှုပါဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်အခြေခံစခွေငျးငှါယန္တရားများ၏အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ (လိုအပ်နေပါသည်နှင့်လူသားတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမမှန်များအတွက်ကုသမှုသို့အသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျFiorino နှင့် Phillips က, 1999b).
3 ။ လူမှု Play စ
3.1 ။ လူမှုရေးကစားအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
လူငယ်နို့တိုက်သတ္တဝါများအကြားလူမှုကစား (စကြမ်းတမ်းခေါ်ကစား tumble) (လူကြီးအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူတွေရဲ့ပုံမှန် display ကိုများအတွက်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးရေး, အလေ့အကျင့်များနှင့်သနျ့အတွက်အခြေခံကျကျပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ထင်နေသည်Panksepp et al ။ , 1984) ။ အကျိုးဆက်အားသုံးသပ်ရန်အတွက်နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ပြောင်းလဲ, Affiliate ရန်လိုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပါအဝင်အဓိကအမူအကျင့်အကျိုးဆက်များအတွက်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုစဉ်အတွင်းကစားများ၏ဆင်းရဲချို့တဲ့ (တွေ့ (Vanderschuren et al ။ , 1997)) ။ အောက်ပါအပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း Juvenile သို့မဟုတ်အထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုအတွက်ဘယ်လိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှု, ဖြစ်စေစူးရှသောထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်မည်, ပြင်းထန်စွာလူမှုရေးကစားအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြွက်များတွင်လူမှုရေးပြဇာတ် (ကတစ်လအပါအဝင်အမူအကျင့်ပြုမူသောအမှုအရေအတွက်, တိုကျခိုကျ, nape တိုက်ခိုက်မှု, လက်ဝှေ့, နပန်းနှင့်လူမှုရေးဖြီးလိမ်းပုံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Panksepp et al ။ , 1984; Vanderschuren et al ။ , 1997), အရာရှိသမျှတို့ကိုပြင်းထန်စွာမော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အီသနော၏မှတ်သားလောက်ခြွင်းချက်နှင့်အတူအလွဲသုံးစားမှု () ၏မူးယစ်ဆေးဝါးကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှစူးရှသောထိတွေ့မှုကအောက်ပါနှောင့်အယှက်နေကြသည်။ methylphenidate (MP) ဥပမာအားဖြင့်အရံဆေးထိုး, extracellular DA အဆင့်ဆင့် (elevates အကြောင်း, ကိုကင်းကဲ့သို့လုပ်ကွက် DA reuptake နှင့် psychostimulant မူးယစ်ဆေးကူးတို့နှင့်အတန်, 1979ငယ်ရွယ်ကြွက်များတွင်), လုနီးပါးဖယ်ရှားပစ်ကစားအပြုအမူတွေ (Beatty et al ။ , 1982; Vanderschuren et al ။ , 2008) ။ ဒီဖက်အမတ်ကစားရန်ကစား၏စတင်များနှင့်တုန့်ပြန်နှစ်ဦးစလုံးနှိမ်နင်းကြောင်းညွှန်ပြ, ပြဇာတ်ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးကစား dyad ့တဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှပေးသောခဲ့သည်ဘယ်မှာစမ်းသပ်ချက်, အမတ်-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆား-ကုသမိတ်ဖက်အပေါ်သို့လူးလာပွေးမပြုခဲ့ Initiative (Vanderschuren et al ။ , 2008) ။ အရေးကြီးတာက, locomotor လှုပ်ရှားမှုမပွောငျးလဲဒီလူမှုရေးတှေ့ဆုံစဉ်အတွင်းထင်ရှားရှိကြ၏။ AMPH ၏ Peripheral ဆေးထိုးသိသိသာသာ (လူမှုရေးပြဇာတ်များ၏ကြာချိန်နှင့်ကစားနေစဉ်အတွင်းပြသတံသင်၏နံပါတ်လျော့နည်းသွားသော်လည်း, မျိုးစုံလေ့လာမှုများအတွက်လူမှုရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတိုးလာBeatty et al ။ , 1984; Beatty et al ။ , 1982; Sutton နှင့် Raskin, 1986) ။ ထို့အပြင်ဖိန်းဓာတ်နှင့်နီကိုတင်းလည်း (ကစားအပြုအမူတွေကိုနှောင့်အယှက်Holloway နှင့် Thor, 1985; သီရဲလ် et al ။ , 2009) ။ သို့သော်နီကိုတင်း၏စူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများယာယီ (အရေပြားအောက်ဆုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏ 5min အတွင်းပေးထားသည့်အခါနီကိုတင်းလူမှုရေးကစားလျော့နည်းသွားအဖြစ်ကမကထပြုခဲ့ခြင်း, ဆေးထိုးပြီးနောက်လူမှုရေး interaction က 10 နှင့် 30min တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါIrvine et al ။ , 1999; သီရဲလ် et al ။ , 2009; Trezza et al ။ , 2009) ။ နီကိုတင်းဖို့အပြင်, မော်ဖင်းအကိုက်မှထိတွေ့မှု (Normansell နှင့် Panksepp, 1990; Vanderschuren et al ။ , 1995a; Vanderschuren et al ။ , 1995b) နှင့်အီသနော (Trezza et al ။ , 2009) ကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်-related, လူမှုရေးရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ် locomotor အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲမပါဘဲမိတ်ဖက်များအကြားကစားမြှင့်တင်ရန်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှု, အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှုကိုလည်းလူငယ်လူမှုရေးကစားအပြုအမူကိုပြောင်းလဲမှု။ လူသားမြားသညျတှငျ, မွေးဖွားမီကိုကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူဖြစ်စေထိတွေ့နေသောကလေးများမဟုတ်တဲ့မူးယစ်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုထက်နည်းပါးလာအလိုအလျောက်ကစားဖြစ်ရပ်များသရုပ်ပြနှင့်ဤပြဇာတ်ဖြစ်ရပ်များ (စနစ်တကျနှင့် Non-အကြောင်းအရာအလိုက်ခဲ့ကြသည်Rodning et al ။ , 1989) ။ ကြွက်များနည်းကိုကင်း-ထိတွေ့အမျိုးအနွယ်ကို Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့ကစားမိတ်ဖက် (ခုနှစ်တွင်သစ်သား et al ။ , 1994) နှင့် conspecifics ကနေလျော့နည်းကစားတောင်းနိုင်အောင်ရူးနှမ်း (သစ်သား et al ။ , 1995) ။ အရေးကြီးတာက, ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုလူကြီးသို့ဆက်လက်ရှိပေမည်။ အသက် 120 ရက်ပေါင်းမှာအရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ကိုစမ်းသပ်သည့်အခါကင်းမှမွေးဖွားမီ-ထိတွေ့ကြွက် (ဆား-ထိတွေ့ကြွက်များထက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ sniffing, အောက်ပါ, မြောကျမတို့, လက်ဝှေ့နှင့်နပန်းအပါအဝင်လျော့နည်းလူမှုရေးအပြန်အလှန်, ပြသOverstreet et al ။ , 2000) ။ လူမှုရေးကစားအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့ပြီးနောက်မှတ်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ အထူးသကြွက်သိသိသာသာပိုပြီးအသက်3နှင့်4ရက်သတ္တပတ်မှာမော်ဖင်းအကိုက် Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့ကစားဖက်များမှမွေးဖွားမီ-ထိတွေ့နှင့်လူကြီးအတွက်ပိုပြီးလူမှုရေးချဉ်းကပ်နည်းလူမှုရေးရှောင်ရှားပြသ (Niesink et al ။ , 1996).
3.2 ။ mesocorticolimbic DA ၏အခန်းက္ပ
လူမှုရေးကစားအားဖြည့်နေသည်ကတခြားသဘာဝကျကျလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ, (ကဲ့သို့ပင်ဥပမာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်) အကစားဖက်နှင့်အတူလူမှုရေးပြဇာတ်၏အကျဉ်းကာလများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက်ရှုပ်ထွေးဝင်္ညှိနှိုင်းရန်ပါလိမ့်မယ် (Normansell နှင့် Panksepp, 1990), နှင့်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် mesocorticolimbic DA (ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်Panksepp et al ။ , 1984; Vanderschuren et al ။ , 1997) ။ လူမှုကစား (လူငယ်ကြွက်များ၏ forebrain အတွက် DA အဆင့်ဆင့်နှင့် DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးလာPanksepp, 1993) ။ အဆိုပါအကြိမ်ရေနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့် / သို့မဟုတ်လူမှုရေးဖြီးလိမ်းပုံတစ်လ၏ကြာချိန်သိသိသာသာ haloperidol, အထွေထွေ DA အဲဒီ receptor ရန် (အားဖြင့်ယုတ်လျော့ခဲ့သည်Beatty et al ။ , 1984; Holloway နှင့် Thor, 1985; Niesink နှင့်ဗန် Ree, 1989) ။ ဦးစား presynaptic DA receptors (activate လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ apomorphine ၏ထို့အပြင်အနိမ့်ဆေးများ,ဆိုလိုသည်မှာ, autoreceptors) နှင့်အားဖြင့် DA လွှတ်ပေးရန်တားစီး, (အပြုအမူတစ်လနှင့်မြောကျမတို့၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်လျော့နည်းသွားNiesink နှင့်ဗန် Ree, 1989) ။ ဆနျ့ကငျြ, ဖွယ်ရှိအကျူးများနှင့် postsynaptic နှစ်ဦးစလုံး DA receptors ကိုသက်ဝင်ရာ apomorphine မြင့်မားဆေးများ, (အပြုအမူတစ်လနှိုးဆွပေးBeatty et al ။ , 1984) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများလူမှုရေး play မှာ DA neurotransmission များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် 6-hydroxydopamine ၏ intraventricular ထိုး (6-OHDA) ပေးထားမွေးကင်းစကလေးများကြွက်, သိသိသာသာ dorsal striatum နှင့် NACC အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ကုန်ခမ်း and Play ပာ၏ခြင်းကိုနှင့်ရန်အကူးအပြောင်းမှဦးဆောင်ပြုလုပ် Juvenile အဖြစ်ပြောင်းလဲထိုးစစ်နှင့်ခံစစ်ကစားအပြုအမူတွေပြသခဲ့ကြောင်း ထိုကဲ့သို့သော allogrooming ကဲ့သို့သောအခြား non-ကစားအပြုအမူတွေ, (Pellis et al ။ , 1993) ။ mesocorticolimbic DA ထို့ကြောင့်လူမှုရေးကစားဘို့အအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, တိကျတဲ့ဦးနှောက်ဒေသများနှင့် DA အဲဒီ receptor မိသားစုများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနေဆဲအကြီးအကျယ်မသိနိုင်ပါဘူး။
စူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ကစားအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်ယန္တယားမသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ psychostimulants တိုက်ရိုက် NACC အတွက် DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်အဖြစ်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများမကြာခဏ DA neurotransmission အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုမှစွပ်စွဲနေကြသည်။ သို့သော် DA အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူ pretreatment (ကစားအပြုအမူတွေ၏ MP- သို့မဟုတ် AMPH-သွေးဆောင်နှောင့်အယှက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘူးBeatty et al ။ , 1984; Vanderschuren et al ။ , 2008), ပြောင်းလဲ DA neurotransmission လူမှုရေးကစားအပေါ်ဒီဆေးတွေရဲ့သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိမကျမည်အကြောင်းညွှန်ပြ။ ဤအ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်တကျခဲ့ကြသည်နှင့်အမျှနောက်ထပ်ဗဟိုထိန်းသိမ်းရေးပိုပြီးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လူမှုရေးကစားအပေါ်ပါလီမန်အမတ်နှင့် AMPH ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ဗဟို DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီဆေးတွေရဲ့အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများ DA အဲဒီ receptor ရန်တစ်-flupenthixol နှင့်အတူ pretreatment ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်အဖြစ် DA အဲဒီ receptor activation သို့သော် (ရှင်းလင်းစွာလူမှုရေးကစားအပေါ်နီကိုတင်းနှင့်အီသနော၏အပြုသဘောဆောင်စူးရှသက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Trezza et al ။ , 2009).
အနည်းငယ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်မွေးဖွားမီအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ဘာသာရပ်များအတွက်လူမှုရေးပြဇာတ်၏အပြောင်းအလဲတချို့အခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများလေ့လာခဲ့ကြပေမဲ့လည်းကကိုယ်ဝန်ဆောင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, အထူးသဖြင့်ကိုကင်းအလယ်ပိုင်း DA စနစ်များအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ပွောငျးလဲအတွက်ရလဒ်များကိုမှထိတွေ့မှုနှင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် ထိုအပြောင်းလဲအသက်တာ၌အကြာတွင်ချို့ယွင်းအပြုအမူအခြေခံဖြစ်နိုင်သည် (လှံကို et al ။ , 1989) ။ monoamines ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ ((play ကြောင်းပေးထားLevitt et al ။ , 1997)) နှင့် DAergic afferents နှင့် receptors ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစဉ်အတွင်း limbic ဒေသများတွင်အထူးသပစ္စုပ္ပန်များမှာ (Schambra et al ။ , 1994; Tennyson et al ။ , 1973) ဤဒေသများတွင်ဤအချိန်ကာလအတွင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ အမှန်မှာမွေးဖွားမီကိုကင်းထိတွေ့ဘာသာရပ်များ (ထိုနှောက် cortex ၏ DA-ကြွယ်ဝသောဒေသများရှိခန္ဓာဗေဒအပြောင်းအလဲများနှင့်ပြောင်းလဲ D1R-G ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီအသံထွက်ကြပါပြီLevitt et al ။ , 1997) ။ DA receptors ၏သိပ်သည်းဆလည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ် mesocorticolimbic နှင့် nigrostriatal DAergic ဦးနှောက်ဒေသများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပြောင်းလဲ, ဤပွောငျးလဲ (အမျိုးအနွယ်၏အသက်အရွယ်နှင့်လိင်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်တည်းဖြတ်ခံရဖို့ပုံရသည်နေကြတယ်dow-Edwards က et al ။ , 1990; ကူးတို့ et al ။ , 2007; Glatt et al ။ , 2000; Leslie et al ။ , 1994; Scalzo et al ။ , 1990) ။ ထို့ပြင်အဆိုပါ NACC, VTA, amygdala, MPOA, substantia nigra နှင့်က CP ပြပွဲအပါအဝင်, ဤဒေသများ, များစွာသောသိသိသာသာ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချdow-Edwards က et al ။ , 1990) ။ Psychopharmacological စမ်းသပ်ချက်ကြောင်းအကြံပြုချက်ကိုလည်းထောက်ခံကြပါပြီ သန္ဓေသားဘအတွက် ကိုကင်း-ထိတွေ့ Juvenile DAergic ထိန်းသိမ်းရေးထိခိုက်မခံတဲ့ပြောင်းလဲသကဲ့သို့ကင်းထိတွေ့မှု (DA စနစ်များမြားတှငျပွောငျးလဲတည်တံ့ဖြစ်ပေါ်စေမည်လှံကို et al ။ , 1989) ။ ထို့အပြင်လက်ရှိစာပေ၏ Meta-analysis သည်ကြောင်းအသက်အရွယ်အလယ်အလတ် DA အဆင့်ဆင့်မွေးဖွားမီကိုကင်းထိတွေ့နှင့်ဆိုနိုင်သည် (အရွယ်ရောက်သူများတွင်တိုးမြှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ယုတ်လျော့ခံရဖို့လေ့ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းအထူး striatum အတွင်း DA အဆင့်ဆင့်အပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ, ညွှန်ပြထားပြီးGlatt et al ။ , 2000) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ DAergic အာရုံကြောအလွှာအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်နေစဉ်, အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤသို့မဟုတ်အခြားပွောငျးလဲလူမှုရေးပြဇာတ်၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
4 ။ ရန်လိုမူအကျင့်
4.1 ။ ရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
လူ့လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု၏နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကျူးကျော်များ၏တိုးပွားဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါ, အရက်ကိုလောင်ကြောင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး (အခြားသူများဆီသို့ကျူးကျော်များ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်ပြသChermack နှင့်တေလာ, 1995; Giancola et al ။ , 2009) ။ ထို့ပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုပြင်းပြင်းထန်ထန် (လက်နက်-related အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူသတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Hagelstam နှင့် Hakkanen, 2006; Madan et al ။ , 2001; Spunt et al ။ , 1998မိတ်ဖက်-ညွှန်ကြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အပါအဝင်), ရငျးနှီးဖက်ကျူးကျော်, (Chermack et al ။ , 2008; O'Farrell နှင့် false-Stewart က, 2000), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (el-Bassel et al ။ , 2001) နှင့်ကလေးသည်အလွဲသုံးစားမှု (Haapasalo နှင့် Hamalainen, 1996; Mokuau, 2002; Walsh et al ။ , 2003) ။ စုပေါင်း, မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောအကြမ်းဖက်မှုများ (မိသားစုစနစ်ကကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ထောင်ချဖို့ဦးဆောင်Krug et al ။ , 2002), သိသာထင်ရှားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းစိုးရိမ်မှုများကိုဖန်ဆင်း၏။
လူသားများတွင်ကျူးကျော်သုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်နေစဉ်, Non-လူ့မျောက်နှင့်ကြွက်မော်ဒယ်များစနစ်တကျကျူးကျော်အပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အလုပ်ခန့်ပြီ။ ထိုးစစ်နှင့်ကာကွယ်ရေး: ကြွက်များတွင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုကွဲပြားအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားထားပါသည်။ ခုခံကာကွယ်ကျူးကျော်မကြာခဏဖြောင့်မတ်ခရီးစဉ်နှင့်ပြန်လည်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှု (ပါဝင်သည်သော်လည်းထိုးစစ်ဆင်ကျူးကျော်များ၏ဥပမာခြိမ်းခြောက်မှုများ, တိုက်ခိုက်မှုများ, ကိုက်နှင့် Chase ပါဝင်သည်Blanchard ဖြစ်ပြီးခြင်းနှင့် Blanchard ဖြစ်ပြီး 1977; Blanchard ဖြစ်ပြီး et al ။ , 1977) ။ ဤအပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုအများဆုံးမကြာခဏယောက်ျားအတွက်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနေချိန်မှာ intermale တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း, သူတို့ကလည်းအများအား parturition ပြီးနောက်, ဤအခြေအနေများအောက်တွင်အမျိုးသမီးအတွက်တိုင်းတာကြသည်, စုပေါင်း ( 'မိခင်ကျူးကျော်' 'အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်Gammie နှင့် Stevenson, 2006; Johns et al ။ , 1998a; Johns et al ။ , 1994; Numan, 1994; Siegel et al ။ , 1983) ။ ကျနော်တို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ကျူးကျော်အပေါ်စူးရှနှင့်အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်ဤအပြုအမူကိုဆန်းစစ်သုတေသနအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်မကြာမီပြောင်းလဲစေခြင်းငှါသရုပ်ပြကြနှင့်ဤသက်ရောက်မှုများ directionality မူးယစ်ဆေးနှင့်ထိုးအုပ်ချုပ်အဖြစ်ဘာသာရပ်များအကြားတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်ကြောင်း။ အချို့သောနေထိုင်သူအထီးကြွက်အရက်၏အနိမ့်ထိုးအုပ်ချုပ်မှုအပြီးတစ်ဦးကျူးကျော်ဆီသို့ကြီးထွားထိုးစစ်နှင့်ခံစစ်ကျူးကျော်ပြသနေစဉ်ဥပမာ, ကိုအခြားနေထိုင်သူများအတွက်ကျူးကျော် (ထိခိုက်ခဲ့သို့မဟုတ်ပင်ယုတ်လျော့Berry ဟာ, 1993; Miczek et al ။ , 1998), တစ်ဦးတွေ့ရှိချက်ဘာသာရပ်များအကြားတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်မှစဉ်းစားမိတယ်။ သိသိသာသာ Gamma-hydroxybutyrate (GHB), စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကိုမူးယစ်ဆေး, (အနိမ့်ဆေးများမှာအထီးကြွက်တွေမှာထိုးစစ်ကျူးကျော် (ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများ) တိုးလာပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ဆေးများမှာတိုက်ခိုက်မှုအမူအကျင့်ယုတ်လျော့Navarro et al ။ , 2007) ။ ကိုကင်းသို့မဟုတ် AMPH ဖြစ်စေမြင့်မားဆေးများထိုးစစ်ကျူးကျော်လျော့နည်းသွားသော်လည်းထို့ပြင်အမျိုးသားများအတွက်ကိုကင်းများ၏အနိမ့်ထိုးအုပ်ချုပ်ရေး (ထိုးစစ်ကျူးကျော်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့Darmani et al ။ , 1990; Tidey နှင့် Miczek, 1992a), အမူအကျင့်ရလဒ်ကိုအပေါ်မူးယစ်ဆေးထိုး၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ယောက်ျားအတွက်ကိုကင်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူ, High-ထိုးကင်းကုသမှု (အမျိုးသမီးအတွက်ထိုးစစ်မိခင်ကျူးကျော်လျော့နည်းသွားVernotica et al ။ , 1996) ။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှု opiate မူးယစ်ဆေးဝါး, ၏အုပ်ချုပ်မှုမှာလည်းအထူးသဖြင့်ထိုးစစ်ကျူးကျော် (ကျူးကျော်များ၏ပုံစံများပြောင်းလဲပြသထားသည်Ferrari ပြိုင်ကားများနှင့် Baggio, 1982; Gianutsos et al ။ , 1976; Gianutsos et al ။ , 1974; Puri နှင့် Lal, 1973; Rodriguez-Aria et al ။ , 1999; Tidey နှင့် Miczek, 1992b) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူထိုးသွင်းအထီးကြွက်ကတခြားအထီး conspecifics (ဆီသို့တိုးမြှင့်ထိုးစစ်ကျူးကျော်ပြသRodriguez-Aria et al ။ , 1997) ။ ဆနျ့ကငျြ, အမျိုးသမီးကြွက် lactating အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်ထိုး (conspecific အထီးဆီသို့ထိုးစစ်မိခင်ကျူးကျော်လျော့နည်းသွားKinsley နှင့် Bridges, 1986).
ကျူးကျော်အပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ရေတိုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ဟန်ပေမယ့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့တသမတ်တည်း agonistic အပြုအမူတွေ-အထူးသထိုးစစ်ကျူးကျော်-နှင့်ဤသက်ရောက်မှုတည်မြဲနေကြနဲ့ဆက်စပ်သူတွေကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အထီးဆီးရီးယား (၏ဥပမာအားဖြင့်, ကုသမှုဆိုလိုသည်မှာ, ရွှေ) ဟမ်းစတား (Mesocricetus auratus) ကိုကင်းနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း (DeLeon et al ။ , 2002a; Harrison et al ။ , 2000a; မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ , 2005; Knyshevski et al ။ , 2005a; Knyshevski et al ။ , 2005b; Melloni et al ။ , 2001) သိသိသာသာတိုးမြှင့်ထိုးစစ် / လူကြီးအတွက်ကျူးကျော်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်လေ့စော်ကား-စဉ်အတွင်းထားတဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဟို steroids-တ္ထုများနှင့်ထိတွေ့လည်း (လူကြီးအတွက်ထိုးစစ်ကျူးကျော်မြှင့်တင်ရန်တွေ့ရှိထားသည်DeLeon et al ။ , 2002b; Harrison et al ။ , 2000b; Melloni et al ။ , 1997; Melloni နှင့်ကူးတို့, 1996) ။ ထို့ပြင်နို့တိုက်ဆည်အတွက်နောက်ဆက်တွဲမိခင်ကျူးကျော်ခြီးမွှောကျကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်။ အထူးသကိုယ်ဝန်နေ့က 1-20 ထံမှနေ့စဉ်ကင်းထိုးခံသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက် (parturition ပြီးနောက်နှစ်ပတ်တစ်ခုကျူးကျော်တဦးတည်းကိုမှီခိုလတိုးမြှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုပြသJohns et al ။ , 1997b; Johns et al ။ , 1998b) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကိုယ်ဝန်ဆောင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ရန်လိုအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ မွေးဖွားမီကိုကင်းထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးဆည် (တစ်ခုကျူးကျော်ဆီသို့ထိုးစစ်မိခင်ကျူးကျော်၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုပြသMcMurray et al ။ , 2008) ။ ထို့ပြင်အရက်မှမွေးဖွားမီထိတွေ့အထီးကြွက်အထီးကိုထိန်းချုပ်ရန်လူကြီးဆွေမျိုးအတွက်ပိုကောင်းထိုးစစ်ကျူးကျော်ပြသ (Krsiak et al ။ , 1977) ။ ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုမှထုတ်ယူခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှထုတ်ယူခြင်းသည်ကျူးကျော်မှုကိုဖြစ်စေသောသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်ကို 14 ရက်ကြာနေ့စဉ်ဆေးဖြင့်ကုသပေးသောအထီးကြွက်များသည်မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုအားထားမှုကိုအားကိုးအားထားပြုသည့်အတွက်ကားဖြင့်ကုသသောအမှိုက်သရိုက်များထက် ၄၈ နာရီထုတ်ယူသည့်အချိန်တွင်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုပိုမိုများပြားသည် (Rodriguez-Aria et al ။ , 1999) ။ တခြားလေ့လာမှုလည်း (မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုပြီးနောက်ဒီဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ကျူးကျော်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြFerrari ပြိုင်ကားများနှင့် Baggio, 1982; Gianutsos et al ။ , 1976; Gianutsos et al ။ , 1974; Puri နှင့် Lal, 1973; Rodriguez-Aria et al ။ , 1999; Tidey နှင့် Miczek, 1992b), နှင့် methadone အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (Singh က 1975), benzodiazepines (Nath et al ။ , 2000) နှင့်အီသနော (et al File ။ , 1991).
မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကျူးကျော်ကိုလည်းမကြာသေးမီက (ထိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်လေ့လာခဲ့ပြီးMicrotus ochrogasterမိတ်လိုက်ပြီးနောက် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင်း), တစ်ဦးလူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecific တိရိစ္ဆာန်များဆီသို့အလွန်အမင်း Affiliate ဖြစ်သော်လည်း, (နှစ်ဦးစလုံးထိုးစစ်နှင့်ခုခံကာကွယ်ရန်လိုအပြုအမူတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကဲ့သို့) အထီးမြင့်မားရန်လိုကြသည် mated ကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူစိမ်းဆီသို့ (Aragona et al ။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007; Gobrogge et al ။ , 2009; Insel et al ။ , 1995a; ဝမ် et al ။ , 1997; Winslow et al ။ , 1993) ။ ဒါကြောင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသူစိမ်းဆီသို့, ဒါပေမယ့်မကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဖက် (သို့မျက်နှာပြုညွှန်ကြားသည်ကို ထောက်. ဤသည်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ကျူးကျော် '' ရွေးချယ်ကျူးကျော် '' ချေါထားပြီးInsel et al ။ , 1995a; ဝမ် et al ။ , 1997; Winslow et al ။ , 1993) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ AMPH ထိတွေ့မှု (1.03နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်နေ့လျှင် / ကီလိုဂရမ် ip ဆေးထိုး mg) လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecific တိရိစ္ဆာန်များဆီသို့သွေးဆောင်ကျူးကျော် (ထိုးစစ်နှင့်ခံစစ်နှစ်မျိုးလုံးအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းရမှတ် () ထပ်ခါတလဲလဲGobrogge et al ။ , 2009) ။ ထို့ပြင်ဒီ AMPH ကုသမှုတိုးမြှင့်မသာကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူစိမ်းဆီသို့, ဒါပေမယ့်လည်းအကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီး conspecifics (ဆီသို့ကျူးကျော်Gobrogge et al ။ , 2009) ။ ဤရလဒ်သည်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုများနှင့်မိတ်ဖက်-ညွှန်ကြားကျူးကျော်များအကြားအပြန်အလှန်စမ်းသပ်ဖို့အနာဂတ်လေ့လာမှုများများတွင်အသုံးပြုနိုင်အကြံပြုမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ကျူးကျော်များ၏အသုံးအများဆုံးပုံစံများကိုတစ်ဦး (လူသားများတွင်မှတ်ချက်ပြုChermack et al ။ , 2008; O'Farrell နှင့် false-Stewart က, 2000) ။ လေ့လာမှုများဤအမြိုးအစားကနေရလာဒ်ကဒီအမူအကျင့်အပြန်အလှန်အခြေခံ neuromechanisms ထုတ်ဖေါ်ဖို့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လူသားများတွင်ရောဂါဗေဒကျူးကျော်များအတွက်ဝတ္ထုဟော်မုန်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါအလားအလာရှိသည်။
4.2 ။ mesocorticolimbic DA ၏အခန်းက္ပ
အမြားအပွားကို non-DAergic စနစ်များကိုကျူးကျော််ပတ်သက်နေခဲ့ကြပေမယ့်လည်း (အဒမ်, 2006; Kavoussi et al ။ , 1997; Miczek et al ။ , 2002; Nelson နှင့် Trainor, 2007; Siever, 2008), mesocorticolimbic DA လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအမှုသို့အစောပိုင်းသုတေသနပြု VTA နှင့် NACC ၏အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းလျှပ်စစ်ဆွ felines အတွက် hypothalamic လျှပ်စစ်ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်တိုက်ခိုက်အပြုအမူ (နှိမ်နင်းကြောင်းသရုပ်ပြစတိန်းနှင့် Siegel, 1980) နှင့်ကြွက်များအတွင်း NACC facilitated apomorphine-သွေးဆောင်ကျူးကျော်များ၏ neurochemical ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Pucilowski နှင့် Valzelli, 1986) ။ ပိုများသောမကြာသေးမီကပြုလုပ် DA လွှတ်ပေးရန်တစ်ဦးရန်လိုဇာတ်လမ်းတွဲ (များ၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် display ကိုစဉ်အတွင်းကြွက်များ၏ NACC အတွက်တိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်Ferrari ပြိုင်ကား et al ။ , 2003) ။ ထို့ပြင် NACC D1Rs ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (NACC D1R activation ရန်လိုသည့်အပြုအမူများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းညွှန်ပြသူ, ယောက်ျားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကပ်လျက်တည်ရှိ pair တစုံအတွက်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအထီး conspecifics ဆီသို့ကျူးကျော်လျော့နည်းသွားAragona et al ။ , 2006).
ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲအတွက် mesocorticolimbic DA တစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်သွယ်ဝိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေရှိနေပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကင်း-သွေးဆောင်မိခင်ကျူးကျော်အဆိုပါ VTA နှင့် amygdala (အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တိုးချဲ့ DA အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Lubin et al ။ , 2003) ။ ထို့ပြင်နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးနဲ့ကုသ vervet မျောက်သိသိသာသာ (ဆား-ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုထက်အဆင့်ဆင့် binding striatal DA အကြောင်းအရာနှင့် DA Transporter လျော့နည်းသွားခဲ့သည်Melega et al ။ , 2008), သို့သော်ဤအပြောင်းအလဲများမူးယစ်ဆေးကုသမှုလျှောက်လုံးကျူးကျော်များ၏လျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်ကိုမှတ်သားရပါမည်။ တိုက်ရိုက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကျူးကျော်အတွက် mesocorticolimbic DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ကြပြီလေ့လာမှုများ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏များစွာသောထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးကုသမှု (၏ချုပ်ရာတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြဥပမာ,) မူးယစ်ဆုတ်ခွာစဉ်က။ စနစ်ယေဘုယျအားဖြင့် DA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, တစ်ဦးတည်း D1Rs, ဒါမှမဟုတ် D2Rs တစ်ဦးတည်း, သိသိသာသာမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ကျူးကျော်လျော့နည်းသွား (Rodriguez-Aria et al ။ , 1999) ။ သို့သော် site ကို-တိကျတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးတည်း NACC DA receptors သို့မဟုတ် D2Rs ၏အထွေထွေပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ကျူးကျော်တိုးမြှင့်Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 1994), D1Rs ၏ activation လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းအပြုအမူကိုပြောင်းလဲမပါဘဲမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏ Display ကိုယုတ်လျော့နေစဉ် (Tidey နှင့် Miczek, 1992b) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေဆက်ဆက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကျူးကျော်အတွက် DA neurotransmission များအတွက်အခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြနေစဉ်, အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဒီအပြုအမူအတွက် mesocorticolimbic DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
5 ။ Pair ကို Bond
5.1 ။ pair တစုံဘွန်းအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအကြားလူမှုရေး attachment များကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တည်မြဲ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, (လုံးနီးပါးလူ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ပြီး monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်များ၏ 3-5% အကြားဘုံဖြစ်ပါသည်Kleiman, 1977) ။ ယင်း၏အလွန်အမင်းအားဖြည့်သဘာဝနေသော်လည်း pair တစုံဘွန်း (အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏နှောင့်အယှက်သက်ရောက်မှုများကသက်သေအဖြစ်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်စိတ်မချရသောနိုင်ပါသည်Kaestner, 1995) ။ မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့အလွဲသုံးစားမှုနှင့် pair တစုံဘွန်း၏မူးယစ်ဆေးများအကြားရှုပ်ထွေးဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံသည့် neurobiological ယန္တရားများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (အဖော်ရှာပြီးနောက်ရေရှည် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်းအလွန်အမင်းလူမှုရေး, monogamous ကြွက်များမှာAragona နှင့်ဝမ်, 2004; Carter က et al ။ , 1995; Insel နှင့်လူငယ်တို့, 2001; လူငယ်တို့ et al ။ , 2008a) ။ ပြီးတာနဲ့ကပ်လျက်တည်ရှိတဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကွယ်လွန်သည်အထိတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole များသောအားဖြင့်အတူတကွဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်, ပင်, ထို့နောက်ခဲ (အသစ်တစ်ခု pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းစေမည်Getz နှင့် Carter က, 1996; Pizzuto နှင့် Getz, 1998) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမူအကျင့်အညွှန်းကိန်းတဲ့မိတ်ဖက် preference ကို (အဖြစ်ရည်ညွှန်းတစ် conspecific လူစိမ်းကျော်တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်တစ် preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါသည်Insel နှင့် Hulihan, 1995b; Williams က et al ။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993) ။ (ထိုဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး၏ 24 နာရီအကြာတွင်မြင်ကြသည်, ထို့နောက်မှာအနည်းဆုံး2ပတ်တည်Insel နှင့် Hulihan, 1995b).
မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့မှု (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီလျူ et al ။ , 2010) ။ ဤလေ့လာမှု၌, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မျှဆေးထိုး (နဂိုအတိုင်း) ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလေးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်, တစ်ဦးဆားဆေးထိုး, ဒါမှမဟုတ် 1.0 သို့မဟုတ် 5.0 တစ်ဦးဆေးထိုး3ရက်ဆက်တိုက်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာ / ကီလိုဂရမ် AMPH (ip) MG ။ ချက်ချင်းအပြီးသတ်ဆေးထိုးပြီးနောက်နေ့၌ဘာသာရပ်များမိတ်လိုက်၏ 24hrs များအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြပြီးတော့ဖက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရေးအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုများ, တပါးအမျိုးသားထက်သူတို့ရဲ့အကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကုန်နဂိုအတိုင်းနှင့်ဆား-ကုသမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (နှင့်ကိုက်ညီဆိုလိုသည်မှာ, ဖွဲ့စည်းခဲ့မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး) (Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006; Winslow et al ။ , 1993) ။ သို့သော် AMPH နှင့်အတူ pretreated အထီး (AMPH ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးကြောင်းညွှန်ပြ, နှစ်ဦးစလုံးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအချိန်ညီမျှပမာဏသုံးစွဲပုံ 3A) ။ အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတွဲပြီးကာလသို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းမိတ်လိုက်အကြိမ်ရေမကွဲပြားမှု saline- နှင့် AMPH- အကြားမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် AMPH များ၏သက်ရောက်မှုသည်အခြားအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုမှအလယ်တန်းမဟုတ်ကြသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် ကုသတိရိစ္ဆာန်များ။
Dopamine ဟာနျူကလိယ accumbens အတွက် (DA) (NACC) ကိုစိတ်ကြွဆေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် (AMPH) pair တစုံဘွန်း၏ချွတ်ယွင်း -induced ။ A) ကိုနဂိုအတိုင်းနှင့်ဆား-ကုသမိတ်လိုက်၏ 24hrs, (0.0 ပြီးနောက်; သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကုန် 1 ဆေးထိုး / နေ့ /3ရက်) အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ...
မီးမောင်းထိုးပြအထက်တွင်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးစဘွန်းအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့မှု၏ deleterious သက်ရောက်မှုဖော်ပြထားတဲ့ဒေတာ, သို့သော်, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုလည်းအဆိုးအမျိုးသမီးအတွက်လူမှုရေး Bond ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးခင်ကစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား AMPH ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တို့ et al ။ , 2008b) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ AMPH ၏အနိမ့်ဆေးများအမျိုးသမီးအမျိုးသားများထက် AMPH ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံမည်အကြောင်းညွှန်ပြ, ယောက်ျားထက်မိန်းမဦး၌ဤလူမှုရေး preference ကိုတားစီးဖို့ထိရောက်သောခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအယူအဆ (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ AMPH-သွေးဆောင် conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမျိုးသမီး၏ဆေးထိုးတုံ့ပြန်မှုကွေးအတွက်ဘယ်ပြပြောင်းကုန်ပြီ voles-သရုပ်ပြအတွက်ယခင်လေ့လာမှုများကထောက်ခံထားသည်Aragona et al ။ , 2007) ကတညျးလည်း (အလွဲသုံးစားမှု psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms မှတ်တမ်းတင်သည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လေ့လာမှုများကထောက်ခံထားသည်Becker က, 1999; Becker က et al ။ , 2001b; Roth et al ။ , 2004).
5.2 ။ mesocorticolimbic DA ၏အခန်းက္ပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အခြားသူများထံမှယခင်အလုပ် (ထိုအတွက် mesocorticolimbic DA-အထူးသဖြင့် DA neurotransmission ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော NACC-ကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ်Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006; Curtis et al ။ , 2003; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005; Gingrich et al ။ , 2000; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; ဝမ် et al ။ , 1999) ။ မိတ်လိုက်-ထားတဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံး၏ NACC (အတွင်းဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း-တိုး DA လှုပ်ရှားမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်Aragona et al ။ , 2003; Gingrich et al ။ , 2000) ။ ထိုး-ရသည် apomorphine မှတဆင့် NACC DA receptors ၏ activation (မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း induces စဉ်မိတ်လိုက်နေဖြင့်သွေးဆောင် haloperidol လုပ်ကွက်ကနေတဆင့် NACC DA receptors ၏ Pharmacological ပိတ်ဆို့မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းAragona et al ။ , 2003) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ NACC အတွက် DA neurotransmission တစ်စုံနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကဖော်ပြသည်။ အပိုဆောင်း pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ dopaminergic စည်းမျဉ်းအဲဒီ receptor တိကျတဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြပြီ, ထိုကဲ့သို့သောကြောင်း D1R activation ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် D2R activation ဖက်ဦးစားပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ NACC D2Rs ၏ပိတ်ဆို့မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း inhibited သော်လည်းအမှန်မှာထို NACC အတွက် D1Rs ၏ activation, ဒါပေမယ့်မရ D2Rs, (အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း facilitatedAragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006; Gingrich et al ။ , 2000) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ NACC သို့ D1R agonist ၏အုပ်ချုပ်မှု (မိတ်လိုက်သို့မဟုတ် D2R activation အားဖြင့်သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပိတ်ဆို့Aragona et al ။ , 2006) ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ DA အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်းကိုထပ်မံပါ (NACC အတွင်းစခန်း intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏ခြယ်လှယ်ကထောက်ခံထားသည်Aragona နှင့်ဝမ်, 2007) ။ (Camp intracellular အချက်ပြအပေါ်သက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ကြ, သူတို့ကအပြန်အလှန်အရာတွေနဲ့ G-ပရိုတိန်း၏ alpha subunits မှတဆင့် D1Rs နှင့် D2Rs ၏ activation သတိရပါထောင့်ကွက် 1; ပုံ 2) ။ လတ်တလောလေ့လာမှု၌, PKA ၏ activation ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့ pharmacological အေးဂျင့်များ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ဆေးထိုး (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း (D2R activation နှင့်ကိုက်ညီကာအကျိုးသက်ရောက်မှု) facilitatedAragona နှင့်ဝမ်, 2007) ။ ထို့အပြင် PKA လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်း pharmacological အေးဂျင့်များ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ဆေးထိုး (မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်း (D1R activation နှင့်ကိုက်ညီကာအကျိုးသက်ရောက်မှု) တားဆီးAragona နှင့်ဝမ်, 2007) ။ အဆိုပါ NACC core ကိုသို့မဟုတ်က CP ဆန့်ကျင်အဖြစ် NACC shell ကိုဖျော်ဖြေသာလျှင်ဘေးဒဏ်သင့် pair တစုံဘွန်းအထက်ဖော်ပြထားတဲ့ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး၏စိတ်ဝင်စားစရာရှိသမျှသည် pair တစုံဘွန်း၏ DAergic စည်းမျဉ်းလည်းဦးနှောက်ဒေသနှင့်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-သတ်သတ်မှတ်မှတ် (ကြောင်းကိုညွှန်ပြAragona et al ။ , 2006; Aragona နှင့်ဝမ်, 2007).
mesocorticolimbic DA မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်နှင့်အမျှကျနော်တို့ဒီစနစ်မြားတှငျပွောငျးလဲမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအခြေခံစေခြင်းငှါတွေးဆ။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် DA receptor မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပရိုတိန်းစကားရပ်၏အဆင့်ဆင့်ဆားနှင့် AMPH (တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦး 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် ip ဆေးထိုးနဲ့ကုသအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်3ဆက်တိုက်ဘို့ရက်ပေါင်း-The မိတ်ဖက် inhibited ထိုနေ့ထိုး regimen preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း) ။ AMPH နဲ့ကုသအထီး AMPH ထိတွေ့ခြင်းဟာ NACC (ထဲမှာ D1R စကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းညွှန်ပြ, ဆားနဲ့ကုသအထီးထက် NACC အတွက် D2R, mRNA နှင့်ပရိုတိန်းတံဆိပ်ကပ် D1R ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုပြသပေမယ့်မရပုံ 3B()လျူ et al ။ , 2010) ။ တစ်ဦးတည်းသာ DA အဲဒီ receptor အမျိုးအစားများ၏သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများမှတ်ချက်ချခဲ့သည်နှင့်အမျှဤရလဒ်များကို AMPH အုပ်ချုပ်ရေး D1Rs မှ D2Rs တစ်ခုတိုးလာအချိုးမှတဆင့်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏တားစီးဖို့ဦးဆောင်သည့် NACC အတွက် DA အဲဒီ receptor Subtype အကြားချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါအကြံပြု ဤဒေသတွင်။ တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှု, D1Rs ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအတွက်နေ့စဉ် AMPH ထိုးထိုး-ရသည်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းဖျက်သိမ်းမတိုင်မီ (လျူ et al ။ , 2010) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာ AMPH ထိတွေ့နေတဲ့ D1R ကမကထပြုခဲ့ယန္တရားမှတဆင့်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားစီးစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ ဒါဟာအယူအဆ D1R activation မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းတဦးတည်းပြီးသားဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကဖွယ်ရှိ (အပိုဆောင်း pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးအတွက်အခန်းကဏ္ဍမသာကြောင်းသရုပ်ပြထားတဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၌အကြှနျုပျတို့၏ယခင်အလုပ်ကထောက်ခံနေသည်Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လိင်-ရင်တော့မှားမယ်အထီး (ထက် NACC အတွက် binding D1R ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းရှိပုံ 3C) ။ D1R သိပ်သည်းဆ၏ဤမွငျ့မားသောအဆင့် (တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် conspecific လူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ကျူးကျော်များ၏ Display ကိုအခြေခံမှထင်နေသည်Aragona et al ။ , 2006), လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးအပါအဝင် (Gobrogge et al ။ , 2007; Gobrogge et al ။ , 2009), pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားအတွက် NACC D1R ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (လူစိမ်းအမျိုးသမီးဆီသို့ရွေးချယ်ကျူးကျော်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်အဖြစ်Aragona et al ။ , 2006()ပုံ 3D) ။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့် neuroplasticity ၏ဒီသဘာဝကပုံစံ (ထင်နေသည်ဆိုလိုသည်မှာအသစ်သောသူတို့၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးအားဖြင့်သာတည် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ထိန်းသိမ်းရန်) pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို NACC D1Rs တိုးတက်လာခဲ့သည်။ AMPH ထိတွေ့ NACC D1R စကားရပ်တိုးပွါးကြောင့် AMPH သူတွေဟာမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းမှု, ဒီ neuroplasticity ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ် AMPH ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်လိင်-ရင်တော့မှားမယ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (အကျွမ်းတဝင်များနှင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးဆီသို့တိုးမြှင်ကျူးကျော်ဖော်ပြရန်ပုံ 3E()Gobrogge et al ။ , 2009), အရာတစ်စုံဘွန်း၏ချွတ်ယွင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Lab ထဲမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစမ်းသပ်ချက် AMPH mesocorticolimbic DA နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော neuropeptide စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond ချို့ယွင်းသောယန္တယားများထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရည်ရွယ်နေကြသည်။
6 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းအပေါ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ
6.1 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ
ဒါဟာအလှနျလူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအထက်ဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုများကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်နေစဉ်, ဒီဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်ကြောင်းအကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုတိုးပွားလာငွေပမာဏလည်းမရှိ။ လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများနှင့်အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်နှင့်ဘဝတစျလြှောကျလုံးလူမှု attachment များကိုများနှင့်အပြန်အလှန်၏ရှေ့မှောက်တွင် / မရှိခြင်းကိုအလွန်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ မိဘ-အမျိုးအနွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အပါအဝင်ခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးပူးတွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စခွေငျးငှါအနေဖြင့်အမှန်စင်စစ်, အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း, နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာအယူအဆအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အများအပြားလေ့လာမှုများကထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်နှင့်ဘဝတစျလြှောကျလုံးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြတ်တောက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက် propensity တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်လူသားအတွက်ကလေးဘဝလျစ်လျူရှု (အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုအထင်ရှားဆုံး, နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌အရက်-related ပြဿနာများတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Widom et al ။ , 1995) ။ မျောက်တွေကိုမှာတော့အရက်သောက် (အရွယ်ရောက်သူမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲ၎င်းတို့၏ရွယ်တူချင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိခင်များအားဖြင့်ဖြစ်စေအသက်တာ၏ပထမခြောက်လကာလအတွင်းကျွေးမွေးပြုစုခဲ့4တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်Higley et al ။ , 1991) ။ တစ်ဦးအီသနော / sucrose ဖြေရှင်းချက်နှင့်တစ်ဦး sucrose ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်နှစ်ဦးစလုံးမှအခမဲ့ access ကိုပေးသည်အခါ, peer-မွေးဘာသာရပ်များနှောင့်အယှက်မိခင်-မွေးကင်းစကလေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအရက်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါညွှန်း, မိခင်-မွေးဘာသာရပ်များထက်သိသိသာသာပိုပြီးအီသနောကိုလောင်လေ၏။ ထို့ပြင်4နှစ်အရွယ်ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့လှောင်အိမ်အိမ်ထောင်ဖက်, မိခင်-မွေးဘာသာရပ်များအနေဖြင့်အများအပြားနေ့ရက်ကာလအဘို့ကွဲကွာခဲ့ကြသည့်အခါအတူတူလေ့လာမှုအတွက်လူမှုရေး interaction ကနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌လည်း (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ညွှန်ပြ, ၎င်းတို့၏အီသနောစားသုံးမှုတိုးပွားလာHigley et al ။ , 1991).
ကြွက်များတွင်မိခင်ခွဲခြာ / ဆင်းရဲချို့တဲ့လေ့လာမှုများထပ်မံနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌မူးယစ်ဆေးမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အစောပိုင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ၏အရေးပါမှုကိုသရုပ်ပြပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့မိခင်ခွဲခြာပထမဦးဆုံးအနည်းငယ် postnatal ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမျိုးစုံရက်ပေါင်းကျော် 1 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီနေ့အဘို့ဆည်ကနေတစ်ခုလုံးကိုနဂိုအတိုင်းအမှိုက်သရိုက်များ၏ခွဲခြာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ မိခင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီခွေးများနေ့စဉ်ခွဲနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေခွဲထုတ်ခဲ့သည် မှလွဲ. မိခင်ခွဲခြာဆင်တူခဲ့သည်။ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့မျောက်တွေကိုအတွက်လေ့လာမှုနှင့်အညီ, သားဖွား-ကွဲကြွက် (ပုံမှန်အားဖြင့်-မွေးထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာပိုပြီးအီသနောသောက်Huot et al ။ , 2001; Ploj et al ။ , 2003) ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီလေ့လာမှုများအတွက်စုစုပေါင်းအရည်စားသုံးမှုမကွဲပြားမှုအစောပိုင်းမိခင်ခွဲခြာတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲကြောင်းအရက်စားသုံးမှုညွှန်ပြ, မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အလားတူပဲမိခင်-ဆုံးရှုံးကြွက် (ပုံမှန်အားဖြင့်-မွေးထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာတိုးမြှင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် AMPH စားသုံးမှုနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင်ဝယ်ယူပြသKosten et al ။ , 2000; Vazquez et al ။ , 2006) ။ အရေးကြီးတာက, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလေ့လာမှုမှာ, အစားအစာသို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာများ၏ဝယ်ယူမကွဲပြားမှုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် (Kosten et al ။ , 2000) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဖို့အားနည်းချက်အပေါ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစောပိုင်းပြတ်တောက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ သို့သော်သူကမျိုးဗီဇအချက်များနှင့်လူမှုရေးပြဿနာများ၏တိကျသောအချိန်သင်တန်းကိုလည်း (ကအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေကြောင်းမှတ်သားရပါမည်Matthews က et al ။ , 1999; ဗန် der Veen et al ။ , 2008) ။ ထို့ပြင်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲအပြင်စောစောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းလည်း (နောက်ပိုင်းအသက်တာ၌လူမှုရေးအပြုအမူတွေအပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်ကုရှနှင့် Kramer, 2005; Lee နဲ့ Hoaken, 2007; Veenema, 2009) ။ ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲလူမှုရေးအပြုအမူနှင့်အပျက်သဘောအစောပိုင်းဘဝဖြစ်ရပ်များထိတွေ့လူကြီးများအားဖြင့်ပြသမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့ပိုမိုမြင့်မားအားနည်းချက်အကြားဆက်ဆံရေးစဉ်းစားရန် intriguing ဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းဘဝလူမှုရေး interaction ကများ၏အရည်အသွေးကိုလည်းနောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု impact လိမ့်မည်။ လူသားများတွင်ဥပမာ, မိဘကလေးကြားဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး (Kendler et al ။ , 2000) ။ အလားတူပင်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့နှင့်ခွေးများ၏မြောကျမတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြွက်များတွင်မိခင်စောင့်ရှောက်မှု၏အဆင့်ဆင့်, အစကိုကင်းနှင့်အအီသနောနှစ်ဦးစလုံး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆက်နွယ်နေကြောင်းပါပြီ။ အထူးသလျက်ဖြီးလိမ်းပုံ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့် (pup မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းယောက်ကိုလျက်ဖြီးလိမ်းပုံ၏အဆင့်မြင့် pup မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Francis ကနှင့် Kuhar, 2008) ။ ဤအကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့နှင့်မြောကျမတို့၏ display ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားမိခင်အပြုအမူတွေ disrupts ပေးသောမိခင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု, တိုက်ရိုက်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားနည်းချက်သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအရေးကြီးသောအချက်ပေါ်ပေါက်။
နည်းတူပြီးစိတ်ပျက်လူမှုရေး interaction ကတစ်ဦးချင်းစီအကြားခိုင်မာတဲ့လူမှုရေး attachment များကိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စေခြင်းငှါ, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ လူသားများတွင်တစ်ခုနဂိုအတိုင်းနျူကလီးယားမိသားစုရှိခြင်းအဆိုးပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုယေဘုယျအားဖြင့်ပြဿနာများနှင့်ထိုကဲ့သို့သော AMPH နှင့်ကိုကင်းအဖြစ် "ခက်" မူးယစ်ဆေး (၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ခေါင်းလောင်း et al ။ , 2000; Ellickson et al ။ , 1999) ။ ထို့ပြင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားလုံးအကြားတည်ငြိမ်, ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှ relapse ၏လျော့နည်းသွားနှုန်းထားများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြKosten et al ။ , 1987) ။ ဒါဟာအယူအဆနောက်ထပ်တစ်စုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လိင်-ရင်တော့မှားမယ်အထီးထက် conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးဖော်ပြ AMPH တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်ရာ၌အကြှနျုပျတို့၏မကြာသေးမီလေ့လာမှုကထောက်ခံနေသည်, ထို pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကိုအကြံပြုခြင်း (AMPH-ဆက်စပ်လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါလျူ et al ။ , 2007).
6.2 ။ Mesocorticolimbic DA ၏အခန်းက္ပ
နည်းနည်း Non-လူ့မျောက်ဝံများနှင့်ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အဆိုပါအပြုအမူ interaction ကအခြေခံယန္တရားလူသားများအတွက်ကလေးဘဝလျစ်လျူရှုနှင့်မိခင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကြောင်းကိုလူသိများသော်လည်း DA စနစ်များပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ပါပြီ။ ကလေးကလျစ်လျူရှုအရှိဆုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ပုံစံ (ဖြစ်သော၏မတရားသဖွငျ့အကြောင်းမဲ့ဥပမာအားဖြင့်, ကလေးများ,အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီ 1993), အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံး6နှစ်အတွင်း (သိသိသာသာနိမ့် DA beta ကို hydroxylase (အာရုံခံအတွက် norepinephrine မှ DA ပြောင်းပေးသောအင်ဇိုင်း) maltreated မခံခဲ့ရကြောင်းကလေးများထက်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့Galvin et al ။ , 1995) ။ ဓာတ်လှေကားအခြေခံဆီး DA အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြde ဝမ်း et al ။ , 1999) ။ ထိုအပြောင်းလဲများအလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုသေးကိုမသိရပေမယ့်, က (အစောပိုင်းအသက်တာ၌လူမှုရေးပြဿနာများအားဖြင့်သွေးဆောင် neurophysiological ပွောငျးလဲမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှနောက်ပိုင်းတွင်အားနည်းချက်အခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်de ဝမ်း, 2002; Gordon ကမြင်ပါတယ်, 2002) ။ ဒီအယူအဆများအတွက်ပံ့ပိုးမှုကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့) အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးမျိုးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ထားတဲ့မိခင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ mesocorticolimbic DA တစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုအကြံပြုခြင်း, AMPH နှင့်ကိုကင်းတုံ့ပြန်တိုးမြှင့် NACC DA ဂီယာခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ဒီတိုးမြှင် sensitivity ကိုပု mesocorticolimbic DA စနစ် (ပေါ်မိခင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုတစ်ခုမွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်း, မွေးကင်းစ, လူငယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်Kehoe et al ။ , 1998; Kehoe et al ။ , 1996; Kosten et al ။ , 2003, 2005) ။ အီသနောစားသုံးမှု Non-ကုသကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြီးမိခင်-separated ကြွက်, အ NACC core ကိုအပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်သိသိသာသာနိမ့် D1R binding အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုလည်း differential (လူမှုရေးအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်. mesocorticolimbic DA အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါPloj et al ။ , 2003).
ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်အထောက်အထားအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်အကြံပြုထားသည်။ acute psychostimulants နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စိတ်ကျရောဂါနှစ်ဦးစလုံးမှထိတွေ့မှုယာယီလူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုပွောငျးလဲ, နှင့်အသုံးပြုမှုထပ်ခါတလဲလဲထိုကဲ့သို့သောမိခင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် pair တစုံဘွန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ကျူးကျော်များ၏ compulsive display ကိုအဖြစ်သပ္ပါယ်အပြုအမူတွေအတွက်အမြဲတည်သောလိုငွေပြမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုတချို့လူမှုအပြုအမူများ၏ Display ကိုလျော့ကျစေပါတယ်စဉ်စိတ်ဝင်စားစရာကြောင့်တခြားသူတွေရဲ့ Display ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အပြုအမူပေါ်ဤအကြောင်း differential ကိုသက်ရောက်မှုအခြေခံအဆိုပါယန္တရားများမသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လူမှုရေးအပြုအမူတွေရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြပြီးမျိုးစုံအာရုံကြောဆားကစ်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ အချို့ဆားကစ်ဖွယ်ရှိအားလုံးလူမှုရေးအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်နေစဉ်, အခြားသူများကိုတိကျတဲ့လူမှုရေး interaction ကနေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီအပြုအမူဖျန်ဖြေသောအာရုံကြော circuitry အတွက်ကွာခြားချက်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတချို့အပြုအမူတွေ၏ display ကိုတိုးမြှင့်ရှင်းပြပေမယ့်တခြားသူတွေရဲ့ Display ကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့နောက်ထပ်, မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစား differential (လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါဥပမာ psychostimulants ကျဆင်းခြင်း, လူမှုရေးပြဇာတ်) အနေဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အီသနောတိုး။ မျိုးစုံ neurotransmitter (ဥပမာ, DA, serotonin, norepinephrine) နှင့် neuropeptide (ဥပမာ oxytocin, မိုင်နိုအက်စစ် vasopressin, opioid, dynorphin) စနစ်များပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုလူမှုရေးအပြုအမူပေါ်ဤအကြောင်းမူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရုံအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ, လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်လူမှုရေး interaction ကစောစောဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်နှင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏တည်ရှိမှုစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရှာကြံမူးယစ်ရန်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် relapse မှအနာဂတ်အားနည်းချက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စခွေငျးငှါဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ထို mesocorticolimbic DA system ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သော့ချက်အနေအထား၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာစနစ် (သာလူမှုရေးအပြုအမူ-ကြောင့်ဇီဝသက်ဆိုင်ရာလူမှုရေးဖို့စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးမြား၏တာဝနျကို၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက်ပင်ကိုစရိုက်ကပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်လှုံ့ဆော်မှု-ဒါပေမယ့်လည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့အောက်ပါကောင်းစွာ-စရိုက်လက္ခဏာတွေပြောင်းလဲခြင်းကိုသည်းခံNestler, 2005) ။ ဒါကြောင့်အထက်ဆွေးနွေးလူမှုရေးအပြုအမူများအားလုံးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးအဖြစ် NACC အတွက် DA neurotransmission တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် NACC DA ယင်း၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဤအပြုအမူများအားလုံးနှင့် abuse- ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ interaction ကမှအလားတူလမ်းအတွက်အထောက်အကူပြုဖြစ်စေ, ရွေ့လျား, ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအပါအဝင်လူမှုရေးအပြုအမူတွေ, နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်အဖြစ် မရှင်းလင်းသည်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေ NACC DA လူမှုရေး interaction က၏အားဖြည့်ရှုထောင့် mediates, ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ကြောင်းပြတ်တောက်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲအခြေခံကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ, (NACC အာရုံခံ၏လျော့ချ activation, D2R activation ၏အကျိုးဆက်, ဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များများအတွက်အရေးပါကြောင်းအကြံပြုထားသည်Carlezon နှင့်သောမတ်စ်, 2009) ။ ဒီယူဆချက်နှင့်အညီ, NACC D2R activation (မိခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် pair တစုံဘွန်းအပြုအမူတွေအပါအဝင်အထက်ဆွေးနွေးလူမှုရေးအပြုအမူတွေ, များစွာသော mediatesAragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006; Gingrich et al ။ , 2000; Everitt, 1990; ဆေးလ်ဗား et al ။ , 2003) ။ ထိုကဲ့သို့သော NACC D1R sensitivity ကိုထုတ်ဖော်၏ psychostimulant-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်အဖြစ် NACC လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ, (ဟင်နရီ et al ။ , 1989; ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1991, 1995; လျူ et al ။ , 2010; Simpson et al ။ , 1995), ထို့ကြောင့်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏ချို့ယွင်းမှဦးဆောင်, လူမှုရေးအပြန်အလှန်၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ NACC DA အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုချိန်ခွင်လျှာထိုသို့သောပြောင်းလဲအားဖြည့်အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုလူမှုရေးမှတဆင့်အပြုအမူတွေ-အဖြစ်လူမှုရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအဖြစ်စဉ်များအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါအမူအကျင့်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပုံကိုရှင်းပြပါစေခြင်းငှါ အပြုအမူတွေ၏ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေး။
ဤသုံးသပ်ချက်ကို mesocorticolimbic DA အပေါ်နီးပါးသီးသန့်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပေမဲ့များစွာသောအခြားအာရုံကြောစနစ်များလည်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်အတွက်ဖွယ်ရှိပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောမိုင်နိုအက်စစ် vasopressin နဲ့ oxytocin အဖြစ် neuropeptide စနစ်များ, လူမှုရေး, အပြုအမူတွေကိုအမျိုးမျိုးထိန်းညှိခြင်းနှင့်သိသိသာသာ (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေကြသည်Butovsky et al ။ , 2006; Johns et al ။ , 1997a) ။ ထို့အပြင်ဤ neuropeptide စနစ်များ-အဖြစ် sensitivity ကိုကောင်းစွာအဖြစ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း-ဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ပြောင်းလဲခံရဖို့ထင်, ဤကိုပြောင်းလဲဖွယ်ရှိ (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်အပေါ်အစောပိုင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံကုရှနှင့် Kramer, 2005) ။ ထို့ပြင်ထို systems (လူမှုရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် mesocorticolimbic DA နှင့်အတူအပြန်အလှန်လျူနှင့်ဝမ်, 2003) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အပြုအမူ (Sarnyai, 1998; Sarnyai နှင့် Kovacs, 1994) ။ ထို့ကြောင့်ဤအယူအဆ (ဤစနစ်များကိုအတော်လေး unexplored ခဲ့ပေမယ့်လို့ McGregor et al ။ , 2008), နှင့် mesocorticolimbic DA နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ interaction က, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများအကြားအပြန်အလှန်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်လူသားတွေအတွက်လူမှုရေးရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုနိုင်ဖျန်ဖြေသောအာရုံကြောအလွှာများနှင့် neurotransmitter စနစ်များသို့အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။
ကျနော်တို့ကိန်းဂဏန်းများနဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နှင့်ချားလ်စ် Badland သူတို့ရဲ့အရေးပါစာဖတ်ခြင်းအဘို့လော်ဒီယာ Lieberwirth, ကယ်လီလဲ့, အမျိုးသမီး Melissa မာတင်, အာဒံ Smith ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ZXW မှ KLG မှ Kay, MHF31-25570 မှ DAF31-79600 ပေးအပ်နှင့် DAR01-19627, DAK02-23048 နှင့် MHR01-58616 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
အဒမ် DB ။ ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏ဦးနှောက်ယန္တရားများ: တစ်ခု updated ပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2006; 30 (3): 304-18 ။ [PubMed]
Afonso VM က, Mueller: D, Stewart က J ကို, Pfaus JG ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား pretreatment အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အစာစားချင်စိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Psychopharmacology ။ 2009; 205 (1): 35-43 ။ [PubMed]
Afonso VM က, Sison M က, Lovic V ကို, Fleming က AS ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် Medial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မိခင်အမူအကျင့်များနှင့်၎င်းတို့၏ sequential အဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007; 121 (3): 515-26 ။ [PubMed]
Agmo တစ်ဦးက, ကောက်ယူသူ Z. catecholamines နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမပါဘဲအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 35 (2): 327-34 ။ [PubMed]
Amara အဘိဓါန်စင်ကာပူဒေါ်လာ, Kuhar MJ ။ Neurotransmitter ပို့ဆောင်ရေး: မကြာသေးမီတိုးတက်မှုကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 1993; 16: 73-93 ။ [PubMed]
Aragona BJ, Detwiler JM, အ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားဆုလာဘ်။ neuroscience လက်တ။ 2007; 418: 190-4 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (8): 3483-90 ။ [PubMed]
Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, Curtis JT, Detwiler JM, Insel TR, ဝမ် Z. နျူကလိယ differential dopamine accumbens monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9(1): 133-9 ။ [PubMed]
Aragona BJ, ဝမ် Z. အဆိုပါမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းအပေါ်အပြုအမူ neuroendocrine သုတေသနတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Ilar ဂျေ 2004; 45 (1): 35-45 ။ [PubMed]
နျူကလီးယပ်အတွင်းစခန်းအချက်ပြခြင်းဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစည်းမျဉ်းအတိုက်အခံ Aragona BJ, ဝမ် Z. shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 13352-6 ။ [PubMed]
Avena မိုင်, Hoebel BG ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-sensitized ကြွက်တွင်းသကြားဓာတ်-သွေးဆောင် hyperactivity (လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive) နှင့်သကြား hyperphagia ပြသပါ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003; 74 (3): 635-9 ။ [PubMed]
Bakshi VP, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ် accumbens သို့မျိုးစုံမော်ဖင်းအကိုက် microinjections အောက်ပါနို့တိုက်ကျွေးရေး၏အသိနှင့်အအေးစက်။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 648 (2): 342-6 ။ [PubMed]
Balfour DJ သမား။ နီကိုတင်း၏အမူအကျင့်များနှင့်စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများဖြန်ဖြေအဆိုပါအာရုံခံလမ်းကြောင်း။ Handb Exp Pharmacol ။ 2009; 192: 209-33 ။ [PubMed]
Bardo MT, Bevins RA ။ အေးစက်သောအရပ် preference ကို: အဘယျသို့ကမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preclinical ဥာဏ် add သနည်း? Psychopharmacology ။ 2000; 153 (1): 31-43 ။ [PubMed]
Beatty WW, Costello KB, Berry ဟာ SL ။ စိတ်ကြွဆေးများကကစားတိုက်ပွဲများ၏ဖိနှိပ်မှု: catecholamines ရန်, agonists နှင့်ပေါင်းစပ် inhibitors ၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1984; 20 (5): 747-55 ။ [PubMed]
Beatty WW, Dodge လေး, Dodge LJ, အဖြူရောင် K ကို Panksepp ဂျေ Psychomotor စိတ်ကြွဆေး, လူငယ်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ကစား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1982; 16 (3): 417-22 ။ [PubMed]
Becker က JB ။ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic function ကိုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999; 64: 803-12 ။ [PubMed]
Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2001a; 21 (9): 3236-41 ။ [PubMed]
Becker က JB, Molenda H ကို, Hummer DL ။ ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဖြန်ဖြေယန္တရားများအဘို့အဂယက်ရိုက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2001b; 937: 172-87 ။ [PubMed]
ခေါင်းလောင်း NJ, Forthun LF, Sun က SW ။ attachment, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရည်အသွေးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု: အန္တရာယ်အပြုအမူများ၏လေ့လာမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစား။ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 2000; 35 (9): 1177-206 ။ [PubMed]
Berke JD, Hyman SE ။ စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 25 (3): 515-32 ။ [PubMed]
Berry ဟာက MS ။ murine ကျူးကျော်၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအတွက်ခုခံကာကွယ်အပြုအမူ၏အီသနော-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်။ J ကိုလုံးအရက်ပျော့ပျောင်း။ 1993; 11: 156-62 ။ [PubMed]
အထီးကြွက်များတွင်အပြုအမူအဖော်ရှာအပေါ် Bignami G. အ Pharmacologic လွှမ်းမိုးမှု။ D-စိတ်ကြွဆေး, LSD-25, strychnine, နီကိုတင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသော anticholinergic အေးဂျင့်များ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacologia ။ 1966; 10 (1): 44-58 ။ [PubMed]
Blanchard ဖြစ်ပြီး RJ, Blanchard ဖြစ်ပြီး DC က။ ကြွက်များတွင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ။ ပြုမူနေ Biol ။ 1977; 21 (2): 197-224 ။ [PubMed]
Blanchard ဖြစ်ပြီး RJ, Blanchard ဖြစ်ပြီး, DC, Takahashi T က, ကယ်လီ MJ ။ အဆိုပါ albino ကြွက်များတွင်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ကာကွယ်ရေးအပြုအမူ။ Animation ပြုမူနေ။ 1977; 25 (3): 622-34 ။ [PubMed]
Brackett NL, Iuvone pm တွင်, Edwards က DA ။ Midbrain ကိုတွေ့ရှိရပါသည်, dopamine နဲ့အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1986; 20 (2): 231-40 ။ [PubMed]
Breiter HC, Gollub RL, Weisskoff RM, ကနေဒီ DN, Makris N ကို, Berke JD, Goodman JM, Kantor HL, Gastfriend DR, Riorden JP, Mathew RT ကို, ရို BR, Hyman SE ။ လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1997; 19 (3): 591-611 ။ [PubMed]
တံတားများ RS, Grimm မှန် CT ။ အဆိုပါ opiate ရန် naloxone နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းကုသမှုခံယူနေဖြင့်မိခင်နှင့်ကလေးအပြုအမူမော်ဖင်းအကိုက်ပြတ်တောက်၏ပြောင်းပြန်။ သိပ္ပံ။ 1982; 218 (4568): 166-8 ။ [PubMed]
ဘရောင်း RW, Kolb ခနီကိုတင်းာင်းနျူကလီးယပ် accumbens နှင့် cingulate cortex အတွက် dendritic အရှည်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 899 (1-2): 94-100 ။ [PubMed]
ဘန်း Ka, Chethik L ကို, ဘန်း WJ, Clark က R. မိခင်များနှင့်သူတို့၏မွေးကင်းစအလွဲသုံးစားလုပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အစောပိုင်းကြားဆက်ဆံရေး: အသက်ရှစ်တဆယ်နှစ်လုံးကိုလမှာအကဲဖြတ်။ J ကို Clin Psychol ။ 1997; 53 (3): 279-87 ။ [PubMed]
Butovsky အီး, Juknat တစ်ဦးက, Elbaz J ကို, Shabat-ရှိမုနျကို M က, Eilam R ကို, Zangen တစ်ဦးက, Altstein M က, Delta9-tetrahydrocannabinol မှ Vogel Z. နာတာရှည်ထိတွေ့မှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် oxytocin နှင့် oxytocin-ဆက်စပ် neurophysin downregulates ။ Mol ဆဲလ် neuroscience ။ 2006; 31 (4): 795-804 ။ [PubMed]
Cagiano R ကို, beras ငါ Sabatini R ကို, Flace P ကို, Vermesan: D, Vermesan H ကို, Dragulescu SI, Bottalico L ကိုစူးရှသော MDMA (ecstasy) ၏ကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အသံကျယ်ဂီတနှင့်အတူပေါင်းစပ်အပေါ် Santacroce အယ်လ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ EUR ဗြာ Med Pharmacol သိပ္ပံ။ 2008; 12 (5): 285-92 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Jr ကသောမတ်စ် MJ ။ ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဇီဝအလွှာ: တစ်နျူကလိယ accumbens လှုပ်ရှားမှုယူဆချက်။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 122-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19 (2): 303-14 ။ [PubMed]
ရှမ်ပိန်အက်ဖ်အေ, Chretien P ကို, Stevenson မှ CW, Zhang က ty, Gratton တစ်ဦးက, Meaney MJ ။ နျူကလိယအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24 (17): 4113-23 ။ [PubMed]
Chermack ST, Murray RL, ဝေါ်လ်တန် MA, Booth BA, Wryobeck J ကို, ထိုးနှက် FC အသင်း။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါကုသရာတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားမိတ်ဖက်ကျူးကျော်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာ Correlate ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2008; 98 (1-2): 35-44 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chermack ST, တေလာ SP ။ အရက်နှင့်လူ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: မျှော်မှန်းသက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ် pharmacological ။ J ကိုလုံးအရက်။ 1995; 56 (4): 449-56 ။ [PubMed]
Cooper က JR, Bloom FE, Roth RH အ။ Neuropharmacology များ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးအခြေခံထားပါသည်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, Inc မှ, နယူးယောက်: 2003 ။
Curtis JT, လျူ Y ကို, Aragona BJ, ဝမ် Z. Dopamine နှင့်မယား။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 1126 (1): 76-90 ။ [PubMed]
Curtis JT, Stowe JR, လူမှုရေးနှင့် Non-လူမှုရေး voles အတွက် striatal dopamine system ပေါ်တွင် intraspecific interaction က၏ဝမ် Z. Differential ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2003; 118 (4): 1165-73 ။ [PubMed]
Curtis JT, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Ventral tegmental ဧရိယာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86 (3): 338-46 ။ [PubMed]
ကုရှ BS, Kramer KM ။ neuropeptides နှင့်စတီရွိုက်၏အခန်းကဏ္ဍကို: အစောပိုင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသက်ရောက်မှုအခြေခံ mechanisms ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2005; 29: 1089-105 ။ [PubMed]
Darmani NA, Hadfield MG, Carter က WH, Jr ကမာတင် BR ။ ကြွက်တွေမှာအထီးကျန်မှုတွေ-သွေးဆောင်ကျူးကျော်အပေါ်ကိုကင်း၏ acute နှင့်နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology ။ 1990; 102 (1): 37-40 ။ [PubMed]
de ဝမ်း MD ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ traumatology: အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက် contributory ယန္တရား။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27 (1-2): 155-70 ။ [PubMed]
de ဝမ်း MD, Baum AS, Birmaher B, Keshavan က MS, Eccard CH, Am, Jenkins FJ, ရိုင်ယန် ND Boring ။ AE Bennett ကသုတေသန Award ဆု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ traumatology ။ အပိုင်းကျွန်မ: ဇီဝစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 45 (10): 1259-70 ။ [PubMed]
de လီယွန်, G, Wexler ဟောင်ကောင်။ ဘိန်းဖြူစွဲ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမှ၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 1973; 81 (1): 36-8 ။ [PubMed]
DeLeon KR, အညစျအကွေး JM, ကော် DF, Melloni RH အ, Jr ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ကျူးကျော်: ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက် serotonin အာရုံကြောအချက်ပြခြင်းနှင့် innervation ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002a; 133 (2): 211-20 ။ [PubMed]
။ စော်ကားကျူးကျော်အတူဆက်စပ်မှု: DeLeon KR, အညစျအကွေး JM, Melloni RH အ, Jr ဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက် binding vasopressin V ကို (1A) အဲဒီ receptor တိုးပွါးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးကုသမှုထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ Horm ပြုမူနေ။ 2002b; 42 (2): 182-91 ။ [PubMed]
Devine DP, Leone P ကို, Pocock: D, ပညာရှိ RA ။ Basal mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရေးမော်ဂျူအတွက် ventral tegmental mu, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် Kappa opioid receptors ၏ differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု: Vivo microdialysis လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1993; 266 (3): 1236-46 ။ [PubMed]
di Chiara G. အလှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995; 38 (2): 95-137 ။ [PubMed]
di Chiara, G, Bassareo V ကို, Fenu S က, De Lucas, MA, Spina L ကို, Cadoni ကို C, Acquas အီး, Carboni အီး, Valentini V ကို, Lecca ဃ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: အနျူကလိယ shell ကိုကွန်နက်ရှင် accumbens ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 227-41 ။ [PubMed]
di Chiara, G, Tanda, G, Frau R ကို, Carboni အီးစိတ်ကြွဆေးအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ဦးစားပေးဖြန့်ချိတွင်: ဒေါင်လိုက်စိုက်ထားအာရုံစူးစိုက်မှု Dialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ရရှိသောနောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ Psychopharmacology ။ 1993; 112 (2-3): 398-402 ။ [PubMed]
Dornan WA, Katz JL, Ricaurte GA ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါ MDMA ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1991; 39 (3): 813-6 ။ [PubMed]
dow-Edwards က DL, လွတ်မြောက်လာ LA က, Fico က TA ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ဦးနှောက်အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1990; 57 (2): 263-8 ။ [PubMed]
Eibergen RD, Caggiula AR ။ အထီးကြွက်၏ copulatory အပြုအမူအတွက် Ventral midbrain ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1973; 10 (3): 435-41 ။ [PubMed]
el-Bassel N ကို, Gilbert က L ကို, Rajah V. မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် methadone အပေါ်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးသောအကြမ်းဖက်မှုနှင့် HIV ပိုး၏အန္တရာယ်ကိုမြင့်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2003; 28 (8): 1385-403 ။ [PubMed]
el-Bassel N ကို, Witte အက်စ်အက်စ်, Wada T က, Gilbert က L ကိုအမျိုးသမီးလမ်းပေါ်-based လိင်လုပ်သားများအကြားမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှု Wallace ဂျေဆက်စပ်မှု: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်း, နှင့် HIV အန္တရာယ်များ။ အေအိုင်ဒီအက်စ်လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု STDS ။ 2001; 15 (1): 41-51 ။ [PubMed]
Ellickson PL, Collins RL, ဘဲလ် RM ။ ဆေးခြောက်ထက်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှု: လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်အရာအဘို့တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကိုဘယ်လိုအရေးကြီးသလဲ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 1999; 34 (3): 317-46 ။ [PubMed]
Erskine က MS ။ ပြန်လည်သုံးသပ်: အ estrous အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်တောင်းနိုင်အောင်အပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 1989; 23 (4): 473-502 ။ [PubMed]
Everitt BJ ။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အထီးကြွက်များ၏အစာစားချင်စိတ်များနှင့် copulatory တုံ့ပြန်မှုအခြေခံသည့်ယန္တယားတစ်ခုအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1990; 14 (2): 217-32 ။ [PubMed]
Febo M က, ကူးတို့ CF. ကိုယ်ဝန်မတိုင်မီကင်းအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသူနာပြုစဉ်အတွင်းခွေးများနှင့် prefrontal cortical လှုပ်ရှားမှု၏နောက်ဆက်တွဲမိခင်ပြန်လည်ရယူခြင်းသက်ရောက်သည်။ neuroscience ။ 2007; 148 (2): 400-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ferrari ပြိုင်ကားကို F, ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များအပေါ် lisuride ၏ Baggio G. အသြဇာလွှမ်းမိုးမှု: တစ် dopamine-mimetic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1982; 78 (4): 326-30 ။ [PubMed]
Ferrari ပြိုင်ကား PF, ဗန် ERP လေး, Tornatzky W က, Miczek Ka ။ ကြွက်များတွင်လာမည့်ရန်လိုဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်မျှော် Accumbal dopamine နှင့် serotonin ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 17 (2): 371-8 ။ [PubMed]
Ferraro FM ရေ, 3rd, Kiefer SW ။ စူးရှသောအီသနောကုသမှုအောက်ပါအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004; 78 (3): 427-33 ။ [PubMed]
ကူးတို့ CF, Kulkarni P ကို, Sullivan က JM, Jr ကခက်ခဲဂျာ Messenger ကို TL, Febo အမ် Pup နို့စို့ကိုကင်းထက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ပါသည်: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်သုံးရှုထောင်ကွန်ပျူတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှသက်သေအထောက်အထား။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25 (1): 149-56 ။ [PubMed]
ကူးတို့ MJ, Mactutus CF, ငွေ JM, Hasselrot ဦး, Beaudin လုပ် SA, Strupp BJ, ဗော RM ။ လိင် dopamine နဲ့ကင်းမှမွေးဖွားမီထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် adrenergic အဲဒီ receptor စကားရပ် mediates ။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2007; 25 (7): 445-54 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကူးတို့ RM, တန် FL ။ ကြွက်တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်, striatum နှင့် hypothalamus ထံမှ Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သောအနေဖြင့် l- [3H] norepinephrine နှင့် [3H] dopamine များ၏စုပ်ယူသုံးစွဲမှုအပေါ်စိတ်ကြွဆေး, methylphenidate နှင့် deoxypipradrol ၏ isomers ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1979; 210 (3): 422-8 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှုအပေါ် baclofen နှင့် nitrendipine ၏အရှေ့တောင်, Zharkovsky တစ်ဦးက, Gulati K. အကျိုးသက်ရောက်မှု File ။ Neuropharmacology ။ 1991; 30 (2): 183-90 ။ [PubMed]
Fiorino DF, Phillips က AG က။ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းပြီးနောက်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မြှင့်တင်ရန် dopamine efflux ၏နည်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 1999a; 19 (1): 456-63 ။ [PubMed]
Fiorino DF, Phillips က AG က။ D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအောက်ပါအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏နည်းပြ။ Psychopharmacology ။ 1999b; 142 (2): 200-8 ။ [PubMed]
ကြမ်းပြင်အီး, Meng အယ်လ်ဖက်တမင်းဆေးပြားကို dual ယန္တရားများအားဖြင့် Synaptic တွေ့နေကျမဟုတ်သောအရာမှ dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ neuroscience လက်တ။ 1996; 215 (1): 53-6 ။ [PubMed]
Francis က DD, Kuhar MJ ။ မိခင်ကိုလျက်ဖြီးလိမ်းပုံ၏ frequency ကြွက်များတွင်ကင်းနဲ့အရက်သုံးစွဲခြင်းမှအားနည်းချက်နှင့်အတူအဆိုးဆက်နွယ်နေပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 90 (3): 497-500 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကြွက်၏မိခင်အပြုအမူအတွက် Frankova အက်စ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို။ Psychopharmacology ။ 1977; 53 (1): 83-7 ။ [PubMed]
Gaffori အိုမိခင်အပြုအမူနှင့် ventral mesencephalic tegmentum ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်လူသားစား၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၏က Le Moal အမ် Disruption ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1979; 23 (2): 317-23 ။ [PubMed]
Galvin M က, ဆယ်ပါး Eyck R ကို, Shekhar တစ်ဦးက, စတီးဝဲလ် B, Fineberg N ကို, Laite, G, စိတ်ရောဂါဆေးရုံတင်ယောက်ျားလေးများအတွက် Karwisch G. အ Serum dopamine beta ကို hydroxylase နှင့်မတရားသဖွငျ့။ ကလေးသူငယ် Negl အလွဲသုံးစားပြုမှု။ 1995; 19 (7): 821-32 ။ [PubMed]
Gammie SC, Stevenson မှလုပ် SA ။ ကြွက်တွေမှာမိခင်ကျူးကျော်နှင့်အပြုအမူအပေါ်နို့စဉ်အတွင်းနေ့စဉ်နှင့်စူးရှထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စိတ်ဖိစီးမှု။ 2006; 9: 171-80 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gerfen CR, Engber TM, မာဟန် LC, Susel Z ကို, Chase TN, Monsma FJ, Jr က Sibley DR ။ D1 နှင့် D2 striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံ၏ dopamine အဲဒီ receptor-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်။ သိပ္ပံ။ 1990; 250: 1429-32 ။ [PubMed]
Getz ll, Carter က CS ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ-vole မိတ်ဖက်။ အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်။ 1996; 84: 56-62 ။
Giancola PR စနစ်, Levinson, CA, Corman MD, Godlaski AJ, မောရစ် DH, Phillips က JP, Holt JC ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အရက်နှင့်ကျူးကျော်။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2009; 17 (3): 154-64 ။ [PubMed]
Gianutsos, G, Hynes MD, မော်ဖင်းအကိုက်-ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် clonidine အားဖြင့် apomorphine-သွေးဆောင်ကျူးကျော်များ၏ Lal အိပ်ချ်စွမ်းရည်မြှင့်။ Psychopharmacol Community ။ 1976;2(2): 165-71 ။ [PubMed]
Gianutsos, G, Hynes MD, Puri SK ကို, Drawbaugh RB, apomorphine နှင့် nigrostriatal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ Lal အိပ်ချ် Effect မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းကျူးကျော်ခြင်းနှင့် striatal dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အပေါ်: အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence အတွက် dopaminergic supersensitivity အဘို့သက်သေသာဓက။ Psychopharmacologia ။ 1974; 34 (1): 37-44 ။ [PubMed]
Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114 (1): 173-83 ။ [PubMed]
Glatt SJ, Bolanos, CA, Trksak GH, dopamine စနစ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဃအကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ် Meta-analysis သည်။ Neurotoxicol Teratol ။ 2000; 22 (5): 617-29 ။ [PubMed]
Gobrogge KL, လျူ Y ကို, Jia က X, pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျူးကျော်အတူဝမ် Z. anterior hypothalamic အာရုံကြော activation နှင့် neurochemical အသင်းအဖွဲ့များ။ J ကို comp Neurol ။ 2007; 502 (6): 1109-22 ။ [PubMed]
Gobrogge KL, လျူ Y ကို, Young က LJ, ဝမ် Z. anterior hypothalamic vasopressin pair တစုံ-Bond နှင့် monogamous ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကျူးကျော်ထိန်းညှိ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009; 106 (45): 19144-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ventral tegmental ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ဆွခြင်းဖြင့်ကြောင်အတွက်တိန်း JM, တိုက်ခိုက်အပြုအမူ၏ Siegel ဂျေနှိမ်နင်းရေး။ ဦးနှောက် Res ။ 1980; 183 (1): 181-92 ။ [PubMed]
ဂေါ်ဒွန် HW ။ အစောပိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှဇီဝအားနည်းချက်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27 (1-2): 115-26 ။ [PubMed]
Gottwald SR, Thurman SK ကို။ မွေးကင်းစကာလ၌မိခင်-မွေးကင်းစအပြန်အလှန်နှင့်မွေးကင်းစကလေး arousal အပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ထိပ်တန်းအစောပိုင်းကလေးအထူးအသေးစိတ် Education ။ 1994; 14: 217-231 ။
Grimm မှန် CT, Bridges သည် RS ။ ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူ၏ Opiate စည်းမျဉ်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1983; 19 (4): 609-16 ။ [PubMed]
Guarraci အက်ဖ်အေ, Clark က AS ။ PACE မိတ်လိုက်အပြုအမူဖက်တမင်းဆေးပြားမော်ဂျူ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003; 76 (3-4): 505-15 ။ [PubMed]
Guarraci အက်ဖ်အေ, Frohardt RJ, Hines က D:, Navaira အီး, စမစ်ဂျေ, စိတ်ကြွဆေး၏ Wampler အယ်လ် Intracranial တာဟာ medial preoptic ဧရိယာသို့ပေမယ့်မနျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ပွေးညီမိတ်လိုက်အပြုအမူကိုထိခိုက် accumbens ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 89 (3): 253-62 ။ [PubMed]
K ကိုဝမ် RY Gysling ။ ကြွက်များတွင် A10 dopamine အာရုံခံ၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1983; 277 (1): 119-27 ။ [PubMed]
Haapasalo J ကို, Hamalainen တီကလေးဘဝမိသားစုပြဿနာတွေနဲ့ငယ်ရွယ်အကြမ်းဖက်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကြားလက်ရှိစိတ်ရောဂါပြဿနာများကို။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996; 35 (10): 1394-401 ။ [PubMed]
Hagelstam ကို C, Hakkanen အိပ်ချ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖင်လန်နိုင်ငံ homicides: ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဝိသေသလက္ခဏာများ။ မှုခင်းသိပ္ပံ Int ။ 2006; 164 (2-3): 110-5 ။ [PubMed]
အဆိုပါ pup ပြန်လည်ရယူခြင်းလိုငွေပြမှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ: အ ventral striatum အတွက် 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူအမျိုးသမီးကြွက်၏ Hansen အက်စ်မိခင်အပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1994; 55 (4): 615-20 ။ [PubMed]
Hansen က S, Bergvall AH, ခွေးများနှင့်အတူ Nyiredi အက်စ် Interaction မိခင်ကြွက်များ၏ ventral striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1993; 45 (3): 673-6 ။ [PubMed]
Hansen အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မိခင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် ventral သို့မဟုတ် dorsal striatum အတွက် 6-OHDA-သွေးဆောင် dopamine တွေပျက်စီးမှု၏က S, Harthon ကို C, Wallin အီး, Lofberg L ကို, Svensson K. အဆိုပါဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1991; 39 (1): 71-7 ။ [PubMed]
Harris က GC, အ opiate ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် D2 dopamine receptors ၏ Aston-ဂျုံးစ် G. အပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သဘာဝ။ 1994; 371 (6493): 155-7 ။ [PubMed]
Harrison RJ, ကော် DF, Nowak ကို C, Melloni RH အ။ , မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Jr နာတာရှည်အနိမ့်ထိုးကိုကင်းကုသမှုဟမ်းစတားအတွက်ကျူးကျော်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2000a; 69 (4-5): 555-62 ။ [PubMed]
Harrison RJ, ကော် DF, Nowak ကို C, Nash K ကို Melloni RH အ။ , မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Jr နာတာရှည်ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးကုသမှုနဂိုအတိုင်းဟမ်းစတားအတွက် anterior hypothalamic vasopressin နဲ့ကျူးကျော်တိုးပွားစေပါသည်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2000b; 25 (4): 317-38 ။ [PubMed]
Hawley TL, Halle TG, Drasin RE, သောမတ်စ် Ng ။ စွဲမိခင်ကလေးများ: အစောင့်ရှောက်သူများပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် '' အက်ကွဲကပ်ရောဂါ 'နှင့်မူကြိုကျောင်းသားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ နံနက် J ကို Orthopsychiat ။ 1995; 65 (3): 364-79 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, ဂရင်း, MA, အဖြူရောင် FJ ။ အဆိုပါ mesoaccumbens dopamine စနစ်ကိုကင်းများ၏ Electrophysiological သက်ရောက်မှု: ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1989; 251 (3): 833-9 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, အဖြူရောင် FJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွင်း D1 dopamine အဲဒီ receptor sensitivity ကို၏ persistent တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1991; 258 (3): 882-90 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, အဖြူရောင် FJ ။ နျူကလိယ၏တားစီးတိုးမြှင့်ကင်းမျဉ်းပြိုင်ဖို့အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဇွဲအာရုံခံ accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15 (9): 6287-99 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ်-Gonzalez M က, Navarro-Meza M က, Prieto-Beracoechea, CA, ဂွေဗားရား, MA ။ ကြွက်မိခင်အပြုအမူစဉ်အတွင်း prefrontal cortex နဲ့ ventral tegmental ဧရိယာ၏လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု။ ပြုမူနေ Process ကို။ 2005; 70 (2): 132-43 ။ [PubMed]
Herz အေ Endogenous opioid စနစ်များနှင့်အရက်စွဲ။ Psychopharmacology ။ 1997; 129 (2): 99-111 ။ [PubMed]
Higley JD, Hasert MF, Suomi SJ, အရက်အလွဲသုံးစားမှု Linnoila အမ် Nonhuman မျောက်မော်ဒယ်: အရက်သောက်စောစောအတွေ့အကြုံ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1991; 88 (16): 7261-5 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကိုင်ဆောင်သူ MK, Hadjimarkou MM, ဇွပ် SL, Blutstein T က, Benham RS, ဆက်မက်ကာသီဟာ MM, မိုင်းဂျေအေ။ စိတ်ကြွဆေးအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့် medial amygdala နှင့် hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံ activation ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2010; 35 (2): 197-208 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Holloway WR, Jr, Thor DH ။ ကဖိန်းဓာတ်၏ interactive သက်ရောက်မှု, လှုပ်ရှားမှုအပေါ် 2-chloroadenosine နှင့် haloperidol, လူမှုရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လူငယ်ကြွက်များ၏တိုက်ပွဲများကစား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1985; 22 (3): 421-6 ။ [PubMed]
ဟူ XT, Koeltzow TE, Cooper က, DC, Robertson က GS, အဖြူရောင် FJ, Vezina P. ventral tegmental ဧရိယာစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor အချက်ပြပွောငျးလဲထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ synapses ။ 2002; 45 (3): 159-70 ။ [PubMed]
Huot RL, Thrivikraman ကေဗွီ, Meaney MJ, Plotsky pm တွင်။ လက္ခဏာကုသမှုနှင့်အတူ Long ကအီဗန်ကြွက်များနှင့်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အတွက်မွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအီသနော preference ကိုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ Psychopharmacology ။ 2001; 158 (4): 366-73 ။ [PubMed]
Hurd YL, Ungerstedt U. ကင်း: ကြွက် striatum အတွက် dopamine ဂီယာအပေါ်စူးရှသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်အတွက် Vivo microdialysis အကဲဖြတ်။ synapses ။ 1989;3(1): 48-54 ။ [PubMed]
Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2006; 29: 565-98 ။ [PubMed]
Inciardi ဂျေအေ။ HIV / AIDS ရောဂါ, အထီးအကြားလိင်များအတွက်အက်ကွဲဖလှယ်တဲ့သူလိင်ကွဲ noninjecting မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအန္တရာယ်များ။ NIDA Res Monogr ။ 1994; 143: 26-40 ။ [PubMed]
Insel TR, Preston က S, Winslow JT ။ အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: အ monogamous အထီးအတွက်အဖော်ရှာ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995a; 57: 615-27 ။ [PubMed]
Insel TR, Hulihan တီဂျေ။ pair တစုံဘွန်းများအတွက်တစ်ဦးကကျား, မ-တိကျတဲ့ယန္တရား: monogamous voles အတွက် oxytocin နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995b; 109 (4): 782-9 ။ [PubMed]
Insel TR, Young က LJ ။ ပူးတွဲမှု၏ neurobiology ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001;2(2): 129-36 ။ [PubMed]
Irvine EE, Cheeta S က, ဖိုင်မှတ်တမ်း SE ။ နီကိုတင်း၏စူးရှသောနှင့်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှုများတွင်အပြောင်းအလဲများအချိန်-သင်တန်း။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1999; 10 (6-7): 691-7 ။ [PubMed]
Jackson က D:, ဘန်း R ကို, Trksak, G ရှိမောငျခ, DeLeon KR, ကော် DF, Harrison RJ, Melloni RH အ။ , Jr anterior hypothalamic vasopressin ဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကိုကင်းထိတွေ့မှုများ၏ကျူးကျော်-လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှု modulates ။ neuroscience ။ 2005; 133 (3): 635-46 ။ [PubMed]
Johns JM, Lubin DA, Walker က CH, မီတာ Ke, Mason ဆို GA ။ နာတာရှည်ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းကုသ medial preoptic ဧရိယာ, Sprague-Dawley ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာနှင့် hippocampus အတွက် oxytocin အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းစေပါသည်။ Neuropeptides ။ 1997a; 31 (5): 439-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Johns JM, နယ်လ်ဆင် CJ, မီတာ Ke, Lubin DA, အိပ်ရာ, CD, အေရာစ်တစ်ဦးက, Walker က CH ။ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်မျိုးစုံစူးရှသောကိုကင်းဆေးထိုး၏ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Dev မှ neuroscience ။ 1998a; 20: 525-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Johns JM, လမ်းပြ Noonan LR, Zimmerman LI, McMillen BA, LW, Walker က CH, Lubin DA, မီတာ Ke, နယ်လ်ဆင် CJ, Pedersen, CA, Mason ဆို GA, Lauder က JM အဓိပ္ပာယ်။ နာတာရှည်ကင်းကုသမှု Sprague-Dawley ကြွက်ဆည်အတွက်နဲ့သူတို့ရဲ့မွေးဖွားမီထိတွေ့အမျိုးအနွယ်အတွက်လူမှုရေး / ရန်လိုသည့်အပြုအမူပွောငျးလဲ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1998b; 846: 399-404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Johns JM, လမ်းပြ Noonan LR, Zimmerman LI လီ L ကို, Pedersen CA. Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများနှင့်ရန်လိုစတင်ခြင်းအပေါ်နာတာရှည်နှင့်စူးရှကင်းကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1994; 108 (1): 107-12 ။ [PubMed]
Johns JM, လမ်းပြ Noonan LR, Zimmerman LI လီ L ကို, Pedersen CA. ရေတိုနှင့် Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများနှင့်ကျူးကျော်အပေါ်ကိုယ်ဝန်ကိုကင်းကုသမှုအနေဖြင့်ရေရှည်ဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ Dev မှ neuroscience ။ 1997b; 19 (4): 368-74 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင် AL, နက်ဖြန်အီး, Accornero VH, Xue L ကို, အန်သိုနီ JC, Bandstra ES ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း Maternal: အမူကြိုကာလ၌မိခင်ကလေးကစား interaction ကအပေါ်ခန့်မှန်းဆိုးကျိုးများ။ J ကို Dev မှနျစှာနထေိုကလေး။ 2002; 23 (4): 191-202 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂျွန်ဆင် SW, မြောက်အမေရိက RA ။ Opioids ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine အာရုံခံ excite ။ J ကို neuroscience ။ 1992; 12 (2): 483-8 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ် SR, Gainetdinov RR, Wightman RM, caron MG ။ စိတ်ကြွဆေးလုပ်ဆောင်ချက် mechanisms အဆိုပါ dopamine Transporter ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာဖျောပွထားပါ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18 (6): 1979-86 ။ [PubMed]
Kaestner R. လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်ကိုကင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ စီးပွားရေးသုတေသနအမျိုးသားဗျူရို။ အလုပ်အဖွဲ့စက္ကူအမှတ် 5038 1995
Kalivas PW, Duffy P ကို, A10 dopamine အာရုံခံ၏ Eberhardt အိပ်ချ် Modulation gamma-aminobutyric အက်ဆစ် agonists ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1990; 253 (2): 858-66 ။ [PubMed]
Kall KI ။ စတော့ဟုမ်းရှိအမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အမ်ဖီတမင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ရှေ့ပြေးလေ့လာချက်။ AIDS ပညာရေး Prev ။ 1992;4(1): 6-17 ။ [PubMed]
Kavoussi R ကို, Armstead P ကို, Coccaro အီးထကြွလွယ်သောကျူးကျော်များ၏ neurobiology ။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 1997; 20 (2): 395-403 ။ [PubMed]
Keer SE, Stern ပာ JM ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့မိခင်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်ကိုလျက်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, ဒါပေမယ့်နို့တိုက်ကြွက်များတွင်သူနာပြုအပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ် accumbens ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1999; 67 (5): 659-69 ။ [PubMed]
Kehoe P ကို, shoemaker WJ, Arons ကို C, Triano L ကို, Suresh G. အပုမွေးကင်းစကလေးများကြွက်များတွင်အထီးကျန်စိတ်ဖိစီးမှုထပ်ခါတစ်လဲလဲ: အ 10 နှစ်အရွယ်ကြွက်များတွင်ဦးနှောက် dopamine စနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1998; 112 (6): 1466-74 ။ [PubMed]
Kehoe P ကို, shoemaker WJ, Triano L ကို, ဟော့ဖ်မန်း J ကို, Arons C. အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်လူငယ်အတွက် ventral striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်မြားတှငျပွောငျးလဲထုတ်လုပ်သည့်မွေးကင်းစကလေးများကြွက်များတွင်အထီးကျန်ထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1996; 110 (6): 1435-44 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22 (9): 3306-11 ။ [PubMed]
Kendler KS, Bulik CM, Silberg J ကို, Hettema JM, Myers J ကို, Prescott CA. အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်: တစ်ခု epidemiological နှင့် cotwin ထိန်းချုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiat ။ 2000; 57 (10): 953-9 ။ [PubMed]
Khan က zu, Mrzljak L ကို, Gutierrez တစ်ဦးက, de la Calle တစ်ဦးက, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ dopaminergic လမ်းကြောင်းအတွက် dopamine D2 တိုတောင်း isoform ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြား။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1998; 95: 7731-6 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Khoshbouei H ကို, ဝမ် H ကို, Lechleiter JD, Javitch ဂျာ Galli အေဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine efflux ။ တစ်ဦးကဗို့အား-အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့် intracellular Na + -dependent ယန္တရား။ J ကို Biol Chem ။ 2003; 278 (14): 12070-7 ။ [PubMed]
Kinsley CH, Bridges သည် RS ။ ကြွက်များကိုရွှေ့ဆိုင်ကျူးကျော်အတွက် Opiate ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1986; 25 (5): 1007-11 ။ [PubMed]
Kinsley CH, Turco: D, Bauer တစ်ဦးက, Beverly M က, Wellman J ကို, ဂရေဟမ် AL ။ ကိုကင်းနို့တိုက်ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူစတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပွောငျးလဲ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1994; 47 (4): 857-64 ။ [PubMed]
Kleiman DG ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်စျမယား။ မေးဗြာ Biol ။ 1977; 52 (1): 39-69 ။ [PubMed]
Knyshevski ငါ Connor DF, Harrison RJ, Ricci LA က, Melloni RH အ။ , ရန်လို, ဆယ်ကျော်သက်ကင်း-ကုသဟမ်းစတားအတွက်ရွေးချယ်ထားသော forebrain ဒေသ Jr Persistent activation ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2005a; 159 (2): 277-86 ။ [PubMed]
Knyshevski ငါ Ricci LA က, McCann TE, Melloni RH အ။ , Jr serotonin အမျိုးအစား-1A receptors ဆယ်ကျော်သက်, ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင်ထိုးစစ်ကျူးကျော် modulate ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005b; 85 (2): 167-76 ။ [PubMed]
Koob gf ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး: ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့် function ကို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1992; 13 (5): 177-84 ။ [PubMed]
Koob gf, Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ neurobiology ။ J ကို Neuropsych Clin N. 1997;9(3): 482-97 ။ [PubMed]
Kosten က TA, Miserendino MJ, မွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Kehoe P. Enhanced ဝယ်ယူ။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 875 (1-2): 44-50 ။ [PubMed]
Kosten က TA, Zhang က XY, Kehoe P. နာတာရှည်မွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုကြွက်ခွေးများအတွက် ventral striatal dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2003; 141 (1-2): 109-16 ။ [PubMed]
Kosten က TA, Zhang က XY, Kehoe P. Neurochemical နှင့်မွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005; 314 (2): 661-7 ။ [PubMed]
Kosten TR, Jalali B, Steidl JH, Kleber HD ကို။ opiate အလွဲသုံးစားမှု relapse မှအိမ်ထောင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အပြန်အလှန်၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 1987; 13 (4): 387-99 ။ [PubMed]
Krsiak M က, Elis J ကို, Poschlova N ကို, Masek K. ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအရက်သေစာပေးထားသောကြွက်၏သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့နိမ့်ဦးနှောက် serotonin အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်။ J ကိုလုံးအရက်။ 1977; 38 (9): 1696-704 ။ [PubMed]
အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် Krug ဥပမာ Dahlberg ll, ကရုဏာဂျာ Zwi AB, Lozito R. ကမ္ဘာ့ဖလားအစီရင်ခံစာ။ ဂျီနီဗာ: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 2002 ။ [PubMed]
Kuhar MJ, Ritz MC, Boja JW ။ ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ dopamine ယူဆချက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1991; 14 (7): 299-302 ။ [PubMed]
Kunko pm တွင်, ပြင်သစ်: D, နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်း Izenwasser အက်စ် ALTER: opioids နှင့်အတူ dopamine receptors နှင့်အပြန်အလှန်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1998; 285 (1): 277-84 ။ [PubMed]
Langevin R ကို, Paitich: D, စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်ဘို့မြင်ကြပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားဖြင့်ကျူးလွန်သောလူသတ်မှုအတွက်အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါး, သတ်သေကြိုးစားမှုများနှင့်အခွအေနေမျိုးကွဲများ၏ Orchard B, နေရာလေးကို L ကို, Russon အေအခန်းကဏ္ဍ။ တစ်ဦးကထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု။ Acta Psychiatric Scand ။ 1982; 66 (3): 229-42 ။ [PubMed]
Lee ကတစ်ဦး, Clancy S က, Fleming က AS ။ မိခင်ကြွက် Bar-စာနယ်ဇင်းခွေးများများအတွက်: pup-အားဖြည့်များအတွက်တုံ့ပြန်မိခင်အပြုအမူနှင့်အော်ပရေတာပေါ် mpoa ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများနှင့် limbic ဆိုဒ်များ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999; 100 (1-2): 15-31 ။ [PubMed]
Lee က V ကို, Hoaken PN ။ သိမှတ်ခံစားမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် neurobiological ဖှံ့ဖွိုးတိုး: မတရားသဖွငျ့နှင့်ကျူးကျော်ကြားရှိစပ်လျဉ်းဖြန်ဖြေ။ ကလေးသူငယ်တို့ကိုမတရားသဖွငျ့။ 2007; 12: 281-98 ။ [PubMed]
Lee က SP, ဒီတော့ CH, Rashid AJ, Varghese, G, Cheng R ကို, Lanca AJ, O'Dowd BF, ဂျော့ခ်ျ SR ။ Dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor Co-activation တစ်ဝတ္ထု phospholipase ကို C-mediated ကယ်လစီယမ် signal ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ J ကို Biol Chem ။ 2004; 279: 35671-8 ။ [PubMed]
Lejuez CW, Bornovalova MA, သမီး SB, Curtin JJ ။ အတွင်းစိတ်-မြို့အက်ကွဲ / ကင်းအသုံးပြုသူများနှင့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူများသည်အကြား Impulse နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2005; 77 (2): 169-75 ။ [PubMed]
Leslie, CA, Robertson ကမီဂါဝပ်, Jung AB, Liebermann J ကို, Bennett က JP ။ , neostriatal dopaminergic function ကို၏ postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအပေါ်သို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏ Jr အကျိုးသက်ရောက်မှု။ synapses ။ 1994; 17 (3): 210-5 ။ [PubMed]
Levitt P ကို, Harvey ဂျာ Friedman, E, Simansky K သည်, မာဖီ Eh ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် neurotransmitter လွှမ်းမိုးမှုများအတွက်နယူးသက်သေအထောက်အထား။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1997; 20 (6): 269-74 ။ [PubMed]
လျူ Y ကို, Aragona BJ, Young က ka, Dietz DM, Kabbaj M က, Mazei-Robison M က, Nestler EJ, ဝမ် Z. နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2010; 107 (3): 1217-1222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လျူ Y ကို, Aragona BJ, Young က ka, Dietz DM, Kabbaj M က, ဝမ် ZX ။ Soc ပြုမူနေ Neuroendocrin ABS ။ ပစိဖိတ် Grove,, CA: 2007 ။ social- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆုလာဘ် interaction က၏လေ့လာမှုတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေး; စ။ 3.74 ။
လျူ Y ကို, ဝမ် ZX ။ နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 121 (3): 537-44 ။ [PubMed]
Lubin DA, Cannon JB, Black က MC, Brown က LE, Johns JM ။ နို့တိုက်ကြွက်ရေကာတာ၏ discrete ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ monoamine အဆင့်ဆင့်အပေါ်နာတာရှည်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003; 74 (2): 449-54 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Luo အဘိဓါန်က F, Wu, G, Li က Z ကိုလီ SJ ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ BOLD အချက်ပြမှုများကိုအပေါ်ကိုကင်းနှင့်အကင်း methiodide အားဖြင့်သွေးဆောင်ယုတ်သည်သွေးလွှတ်ကြောသွေးပေါင်ချိန်၏သက်ရောက်မှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med ။ 2003; 49 (2): 264-70 ။ [PubMed]
Lynch WJ, တေလာ JR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်သိသိ amp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) လှုပ်ရှားမှုမော်ဂျူအောက်ပါ Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် persistent အပြောင်းအလဲများကို။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005; 22: 1214-20 ။ [PubMed]
Madan တစ်ဦးက, Beech DJ သမား, Flint အယ်လ်မူးယစ်ဆေးဝါး, သေနတ်နှင့်လေးတွေ: လူ့အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာအကြားအသင်းအဖွဲ့။ J ကိုကလေးအထူးကုမြင့်တက်။ 2001; 36 (3): 440-2 ။ [PubMed]
Markowski VP, Hull က EM ။ Cholecystokinin အထီးကြွက် copulatory အပြုအမူအပေါ် mesolimbic dopaminergic လွှမ်းမိုးမှု modulates ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 699 (2): 266-74 ။ [PubMed]
Matthews ကငွေကျပ်, Robbins TW, Everitt BJ ကာဣန SB ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲမွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပွောငျးလဲ။ Psychopharmacology ။ 1999; 141 (2): 123-34 ။ [PubMed]
Matthews က RT ကို, ဂျာမန်, DC ။ မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဘို့အ Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience ။ 1984; 11 (3): 617-25 ။ [PubMed]
Mattson BJ, ဝီလျံက S, Rosenblatt JS, Morrell JI ။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလတစ်လျှောက်လုံးခွေးများနှင့်ကိုကင်းနှစ်ခုအပြုသဘောအားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2001; 115 (3): 683-94 ။ [PubMed]
Mayer အေဒီ, Faris PL, Komisaruk BR, Rosenblatt JS ။ Opiate ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း parturient ကြွက်များအားဖြင့် placentophagia နှင့် pup သန့်ရှင်းရေးလျော့နည်းစေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1985; 22 (6): 1035-44 ။ [PubMed]
မက်ဒေါ်နယ် CG, Dailey VK, Bergstrom HC, ဝီ TL, Eppolito AK, Smith က ln, Smith က RF ။ Periadolescent နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးနျူကလိယ accumbens ကနေအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာအမြဲတည်သောအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်သည်။ neuroscience လက်တ။ 2005; 385 (2): 163-7 ။ [PubMed]
McElrath K. MDMA နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: လိင်နှင့်လိင်အန္တရာယ်အကြောင်းကို ecstasy အသုံးပြုသူများက '' သညာ။ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 2005; 40 (9-10): 1461-77 ။ [PubMed]
လို့ McGregor, Callaghan PD, Hunt က GE က IS ။ antisocial မှ ultrasocial မှ: သက်ရောက်မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ရေရှည်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားအတွက် oxytocin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ? br J ကို Pharmacol ။ 2008; 154 (2): 358-68 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McMurray က MS, Joyner PW, Middleton CW, Jarrett TM, Elliott သည် DL, Black ကနေ MA, Hofler ့, Walker က CH, Johns JM ။ ကြွက်ဆည်အတွက်မိခင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက် oxytocin အပေါ်ကိုကင်း၏မျိုးဆက်ဆိုးကျိုးများ။ စိတ်ဖိစီးမှု။ 2008; 11 (5): 398-410 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Melega WP, Jorgensen MJ, Lacan, G, Way ကို BM, Pham J ကို, Morton, G, ချို AK, Fairbanks LA က။ ဦးနှောက် neurotoxicity နှင့်အမူအကျင့် profile များကို: လူသားတစ်ဦးထိတွေ့မှု၏ vervet မျောက်မော်ဒယ်များရှုထောင့်များတွင်ရေရှည်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33 (6): 1441-52 ။ [PubMed]
Melis MR, Argiolas အေ Dopamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19 (1): 19-38 ။ [PubMed]
Melloni RH အ, Jr, ကော် DF, Hang PT, Harrison RJ, ကူးတို့ CF. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ရွှေကြွက်များတွင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူစဉ်အတွင်းဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးထိတွေ့မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1997; 61 (3): 359-64 ။ [PubMed]
Melloni RH အ, Jr, ကော် DF, Todtenkopf က MS, DeLeon KR, Sanyal P ကို, Harrison RJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းကုသမှုဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် marking ခြမ်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2001; 73 (4): 561-70 ။ [PubMed]
Melloni RH အ, Jr ကကူးတို့ CF. ရွှေကြွက်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဟို Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1996; 794: 372-5 ။ [PubMed]
Mendelson SD, Pfaus JG ။ level ရှာဖွေ: အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအသစ် assay ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1989; 45 (2): 337-41 ။ [PubMed]
Meredith GE ။ နျူကလိယ accumbens အတွက်ဓာတုအချက်ပြများအတွက် Synaptic မူဘောင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999; 877: 140-56 ။ [PubMed]
Mermelstein PG, Becker က JB ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် PACE copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကြွက်၏ striatum အတွက် extracellular dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995; 109 (2): 354-65 ။ [PubMed]
Miczek Ka, Barros HM, Sakoda L ကို, Weerts EM ။ အရက်နှင့်တစ်ဦးချင်းကြွက်တွေမှာကြီးထွားကျူးကျော်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998; 22 (8): 1698-705 ။ [PubMed]
Miczek Ka, ငါး EW, De Bold JF, De Almeida RM ။ ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏လူမှုရေးနှင့်အာရုံကြောဆုံးအဖွတျ: serotonin, dopamine နဲ့ gamma-aminobutyric အက်ဆစ်စနစ်များမှာ pharmacotherapeutic ပစ်မှတ်။ Psychopharmacology ။ 2002; 163 (3-4): 434-58 ။ [PubMed]
Mintz J ကို, အိုဟဲ K သည်, O 'Brien က CP, ဘိန်းဖြူစွဲ၏ Goldschmidt ဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1974; 31 (5): 700-3 ။ [PubMed]
Missale ကို C, Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber M က, caron MG ။ Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol ဗျာ 1998; 78 (1): 189-225 ။ [PubMed]
Mitchell က JB, opiates ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ထိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ Stewart ကဂျေနည်းပြ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 35 (3): 643-50 ။ [PubMed]
Mokuau N. ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအက Hawaiian ကြားတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ကလေးအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ကြားဝင်အခြေခံပါတယ်။ ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုယ်စားလှယ် 2002; 117 (ပျော့ပျောင်း 1): S82-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီ။ ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုများနှင့်လျစ်လျူရှုနားလည်ခြင်း။ အမျိုးသားအကယ်ဒမီစာနယ်ဇင်း; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1993 ။
Nath ကို C, Saxena က RC, Gupta ကို MB ။ ကြွက်များတွင် lorazepam ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအပေါ် dopamine agonists နှင့်ရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Clin Exp Pharmacol Physiol ။ 2000; 27 (3): 167-71 ။ [PubMed]
Navarro JF, Pedraza ကို C, Gonzalez အက်ဖ်ထူးခြားသောနှင့်အထီးကြွက်တွေမှာအထီးကျန်မှုတွေ-သွေးဆောင်ကျူးကျော်အပေါ် gamma-hydroxybutyrate ၏ subchronic ဆိုးကျိုးများ။ နည်းလမ်းများ Exp Clin Pharmacol ကိုရှာပါ။ 2007; 29 (6): 379-82 ။ [PubMed]
နယ်လ်ဆင် RJ, Trainor ဘီစီ။ ကျူးကျော်များ၏အာရုံကြောယန္တရားများ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007; 8 (7): 536-46 ။ [PubMed]
Ness RM, Berridge KC ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1997; 278 (5335): 63-6 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 24-32 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005; 8 (11): 1445-9 ။ [PubMed]
Neve Ka, Seaman JK, Trantham-Davidson အိပ်ချ် Dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ။ J ကို Reception Signal Transduct Res ။ 2004; 24 (3): 165-205 ။ [PubMed]
Niesink RJ, ဗန် Ree JM ။ အထီးကျန်-သွေးဆောင်ပင်ထိုးနှင့်လူငယ်ကြွက်များ၏လူမှုရေးဖြီးလိမ်းပုံထဲမှာ opioid နှင့် dopaminergic စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Neuropharmacology ။ 1989; 28 (4): 411-8 ။ [PubMed]
Niesink RJ, Vanderschuren LJ, ဗန် Ree JM ။ မော်ဖင်းအကိုက်မှသန္ဓေသားဘထိတွေ့မှုနောက်မှာလူငယ်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးပြဇာတ်။ Neurotoxicology ။ 1996; 17 (3-4): 905-12 ။ [PubMed]
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်: Nocjar ကို C, Panksepp ဂျေနာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိတ်ကြွဆေး pretreatment drug- နှင့်သဘာ-အကျိုးသည်အနာဂတ်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 128 (2): 189-203 ။ [PubMed]
Normansell L ကို, လူငယ်ကြွက်များတွင်ကစား-ဆုခခြံ Spatial ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naloxone ၏ Panksepp ဂျေအကျိုးသက်ရောက်မှု။ dev Psychobiol ။ 1990; 23 (1): 75-83 ။ [PubMed]
Numan အမ်မိခင်အပြုအမူ။ ခုနှစ်တွင်: Knobil အီး, Neill JD, အယ်ဒီတာများ။ မျိုးပွားခြင်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။ နယူးယောက်: Raven စာနယ်ဇင်း; 1994 ။ စစ။ 221-301 ။
Numan M က, Numan MJ, Pliakou N ကို, Stolzenberg DS, Mullins OJ, မာဖီ JM, Smith က CD ကို။ အဆိုပါမိခင်ပြန်လည်ရယူခြင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကြွက်များအတွက်မိခင်အပြုအမူ၏အခြားရှုထောင့်အပေါ် medial preoptic ဧရိယာ, ventral pallidum, ဒါမှမဟုတ်နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2005; 119 (6): 1588-604 ။ [PubMed]
Numan M က, Stolzenberg DS ။ ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူစတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများထိန်းချုပ် dopamine အာရုံကြောစနစ်များနှင့်အတူ Medial preoptic ဧရိယာ interaction က။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2009; 30 (1): 46-64 ။ [PubMed]
O'Farrell တီဂျေ, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက် false-Stewart ကဒဗလျူအပြုအမူစုံတွဲများကုထုံး။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုဆက်ဆံပါ။ 2000; 18 (1): 51-4 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Overstreet DH, Moy အက်စ်အက်စ်, Lubin DA, Gause LR, Lieberman ဂျာ Johns JM ။ ကြွက်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှုတည်မြဲ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2000; 70 (1-2): 149-56 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ခုနှစ်တွင် Panksepp ဂျေ: Rough နှင့်ကစား tumble: တစ်အခြေခံဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်။ Macdonald KB, အယ်ဒီတာ။ SUNY စာနယ်ဇင်း; အယ်လ်ဘာနီ: 1993 ။ စစ။ 147-84 ။
Panksepp J ကို, Knutson B, Burgdorf ဂျေစှဲအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များများ၏အခန်းကဏ္ဍ: တစ် neuro-ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်သစ် '' Self-အစီရင်ခံစာ '' တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ စွဲလမ်း။ 2002; 97 (4): 459-69 ။ [PubMed]
Panksepp J ကို, Siviy S က, Normansell အယ်လ်ကစား၏ psychobiology: သီအိုရီများနှင့်အတိုင်းအတာများအမြင်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1984; 8 (4): 465-92 ။ [PubMed]
Pellis သည် SM, Castaneda အီး, McKenna MM, Tran-ငုယင် LT, Whishaw အိုင်ကျူ။ မွေးကင်းစကလေး dopamine-ကုန်ခမ်းကြွက်များတွင်တိုက်ခိုက်နေကစားပာစည်းရုံးရေးအတွက် striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience လက်တ။ 1993; 158 (1): 13-5 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Damsma, G, Nomikos GG, Wenkstern DG, Blaha CD ကို, Phillips က AG က, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 530 (2): 345-8 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Damsma, G, Wenkstern: D, Fibiger HC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 693 (1-2): 21-30 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ dopamine ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1991; 105 (5): 727-43 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Wilkins MF, Dipietro N ကို, Benibgui M က, Toledano R ကို, ရိုဝီတစ်ဦးက, အိပ်ရာ MC ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် psychomotor စိတ်ကြွဆေးနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ Inhibitory နှင့် disinhibitory ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2009 Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2009.10.004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Piccirillo M က, Alpert je, Cohen ကို DJ သမား, Shaywitz BA ဘွဲ့။ ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်မိခင်အပြုအမူ: ထိုးတုံ့ပြန်မှုဆက်ဆံရေး။ Psychopharmacology ။ 1980; 70 (2): 195-9 ။ [PubMed]
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့သော psychostimulants မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏တစ်ဦးက circuitry မော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1997; 25 (2): 192-216 ။ [PubMed]
Pizzuto T က, Getz ll ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) အိမ်ထောင်ဖက်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်အသစ်တခု pair တစုံကိုဖွဲ့စည်းရန်ပျက်ကွက်။ အမူအကျင့်လုပ်ငန်းစဉ်။ 1998; 43: 79-86 ။ [PubMed]
Ploj K သည်, ရောမ, E, အထီး Wistar ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်ဦးနှောက် opioid နှင့် dopamine receptors အပေါ်မိခင်ခြားနား Nylander ဗြဲ long-term ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2003; 121 (3): 787-99 ။ [PubMed]
Pucilowski အိုနျူကလိယ၏ Valzelli အယ်လ်ဓာတုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်များတွင် septi accumbens: muricide နှင့် apomorphine-သွေးဆောင်ကျူးကျော်အပေါ်သက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1986; 19 (2): 171-8 ။ [PubMed]
Puri S က, morphine- ဆုတ်ခွာကျူးကျော်အပေါ် dopaminergic ဆွသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ Lal အိပ်ချ် Effect ။ Psychopharmacologia ။ 1973; 32 (2): 113-20 ။ [PubMed]
Rashid AJ, ဒီတော့ CH, ဟောင်ကောင်ဟာ MM, Furtak T က, el-Ghundi M က, Cheng R ကို, O'Dowd BF, ဂျော့ခ်ျ SR ။ ထူးခြားတဲ့ဆေးဝါးဗေဒတွေနဲ့ D1-D2 dopamine အဲဒီ receptor heterooligomers အဆိုပါ striatum အတွက် Gq / 11 ၏လျင်မြန်သော activation မှ coupled နေကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 654-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rawson RA, Washton တစ်ဦးက, Domier က CP, Reiber C. မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု: မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားနှင့်ကျား, မများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုဆက်ဆံပါ။ 2002; 22 (2): 103-8 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB ။ ဦးနှောက်နှင့်နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကထုတ်လုပ်အပြုအမူအတွက်ခံနိုင်ရည်အပြောင်းအလဲများကို: စိတ်ကြွဆေးစိတ္တ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကဲဖြတ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1986; 396 (2): 157-98 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993; 18 (3): 247-91 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363 (1507): 3137-46 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, Mitton အီး, Kolb ခကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses ။ 2001; 39 (3): 257-66 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, ဗေ့ခ်ျ VR, Kolb ခနေရာအနှံ့ပေမယ် dendritic နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကျောရိုး, hippocampus နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ neocortex အပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှိုင်းယှဉ် experimenter- ၏ဒေသတွင်းတိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ synapses ။ 2002; 46 (4): 271-9 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, နျူကလိယ accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်လုပ် prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် Kolb ခ Persistent ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17 (21): 8491-7 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခမော်ဖင်းအကိုက်အတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်ကြွက်များ၏ neocortex အတွက်အာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာပွောငျးလဲ။ synapses ။ 1999; 33 (2): 160-2 ။ [PubMed]
Rodning ကို C, Beckwith L ကို, မူးယစ်ဆေးဝါးမှ Howard ဂျေကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့: CNS ချို့ယွင်းထင်ဟပ်အပြုအမူပျက်ယွင်း? Neurotoxicology ။ 1989; 10 (3): 629-34 ။ [PubMed]
Rodriguez-Aria M က, Minarro J ကိုရှိမုန် VM က။ အထီးကြွက်၏ agonistic နှင့်မော်တာအပြုအမူတွေအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် haloperidol ၏ interaction ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1997; 58 (1): 153-8 ။ [PubMed]
Rodriguez-Aria M က, Pinazo J ကို, Minarro J ကို, SCH 23390, raclopride ၏ Stinus အယ်လ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အထီးကြွက်တွေမှာမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ကျူးကျော်အပေါ် haloperidol ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999; 64 (1): 123-30 ။ [PubMed]
Roth ME, Cosgrove KP, ကာရိုး ME ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: preclinical လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 28: 533-46 ။ [PubMed]
Sarnyai Z. oxytocin နှင့်ကိုကင်းဖို့ neuroadaptation ။ prog ဦးနှောက် Res ။ 1998; 119: 449-66 ။ [PubMed]
Sarnyai Z ကို, Kovacs GL ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ neuroadaptation အတွက် oxytocin ၏အခန်းက္ပ။ Psychoneuroendocrinology ။ 1994; 19 (1): 85-117 ။ [PubMed]
Scalzo FM ရေ, အလီ SF, Frambes NA, လှံ LP ။ ကိုကင်းမှမွေးဖွားမီထိတွေ့ကှာသောသူကြွက် ligand ဆှဖှေဲ့တစ်ခုတိုးနဲ့ဆက်စပ် binding striatal D2 dopamine တစ်ခုတိုးပြ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 37 (2): 371-3 ။ [PubMed]
situ Hybrid နှင့်အဲဒီ receptor binding အတွက်ကို အသုံးပြု. ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Schambra UB, Duncan က GE, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Fornaretto MG, caron MG, Fremeau RT ကို။ , D1A ၏ Jr Ontogeny နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor Subtype ။ neuroscience ။ 1994; 62 (1): 65-85 ။ [PubMed]
Schiorring အီး, မိခင်နှင့်မွေးကင်းစကလေး vervet မျောက်အကြား dyadic အပြန်အလှန်အပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး၏အနိမ့်စူးရှသောဆေးများ၏ Hecht အေအပြုအမူသက်ရောက်မှု (Cercopithecus aethiops) ပထမခြောက်လ postnatal လအတွင်း။ Psychopharmacology ။ 1979; 64 (2): 219-24 ။ [PubMed]
Schuler ME, Nair P ကို, အနက်ရောင်ဟာ MM, Kettinger အယ်လ်မိခင်-မွေးကင်းစအပြန်အလှန်: တစ်အိမ်မှာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောမိခင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Clin ကလေး Psychol ။ 2000; 29 (3): 424-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Scott အမတ်, Ettenberg တစ်ဦးက, Olster DH ။ အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်အရက်၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1994; 48 (4): 929-34 ။ [PubMed]
Seip KM, Morrell JI ။ ကိုကင်းများ၏မက်လုံးပေး salience တိုးပွားလာအစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်နေစဉ်အတွင်းကင်း-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုကျော် pup- များအတွက် preference ကိုစိန်ခေါ်: ရာအရပျ preference ကိုနှင့် locomotor အဆိုပါ lactating အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လေ့လာဆန်းစစ်။ Psychopharmacology ။ 2007; 194 (3): 309-19 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Seip KM, Pereira M က, Wansaw အမတ်, Reiss JI, Dziopa EI, Morrell JI ။ အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ရွှေ့ဆိုင်ကာလတစ်လျှောက်ကိုကင်းများမက်လုံးပေး salience ။ Psychopharmacology ။ 2008; 199 (1): 119-30 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကိုယ်ပိုင် DW, Barnhart WJ, Lehman DA, Nestler EJ ။ D1- နှင့် D2 ကဲ့သို့ dopamine အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ဆန့်ကျင်ဘက်မော်ဂျူ။ သိပ္ပံ။ 1996; 271: 1586-9 ။ [PubMed]
ကိုယ်ပိုင် DW, Genova LM, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Barnhart WJ, Spencer JJ, Nestler EJ ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ relapse အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်စခန်း-မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 1848-59 ။ [PubMed]
Sibley DR, Monsma FJ ။ , dopamine receptors ၏ Jr မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1992; 13 (2): 61-9 ။ [PubMed]
Siegel HI, Giordano AL, Mallafre CM, Rosenblatt JS ။ ဟမ်းစတားအတွက်မိခင်ကျူးကျော်: နို့၏စင်မြင့်၏ဆိုးကျိုးများ, ခွေးများ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်ခြင်း။ Horm ပြုမူနေ။ 1983; 17: 86-93 ။ [PubMed]
Siever LJ ။ ကျူးကျော်များနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ Neurobiology ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 165 (4): 429-42 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆေးလ်ဗား MR, ဘာနာဒီဟာ MM, Cruz-Casallas PE, Felicio LF ။ နျူကလီးယပ် accumbens သို့ Pimozide ထိုးနို့တိုက်ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူနှောင့်အယှက်။ Pharmacol Toxicol ။ 2003; 93 (1): 42-7 ။ [PubMed]
Simpson ဖြစ်မှု, ဝမ် JQ, McGinty JF ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး phosphorylated cyclase တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းနဲ့ကြွက် striatum အတွက် Fos-related ကိုပဲ immunoreactivity တစ်ကြာရှည်တိုးပွားဖြစ်ပေါ်သည်။ neuroscience ။ 1995; 69 (2): 441-57 ။ [PubMed]
Singh က JM ။ Methadone-သွေးဆောင်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများ: မြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှုတွေ, ကျူးကျော်များနှင့် electrophysiological ရှုထောင့်။ int J ကိုစွဲလမ်း။ 1975; 10 (4): 659-73 ။ [PubMed]
Sklair-Tavron L ကို, ရှီ WX, ယာဉ်ကြော SB, Harris က HW, Bunney BS, Nestler EJ ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာမြင်နိုင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1996; 93 (20): 11202-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Slamberova R ကို, Charousova P ကို, Pometlova အမ်မိခင်အပြုအမူ Pre-မိတ်လိုက်, ကိုယ်ဝန်နှင့်နို့ကာလအတွင်းအုပ်ချုပ်စိတ်ကြွဆေးများကအာရုံချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ Reprod Toxicol ။ 2005a; 20 (1): 103-10 ။ [PubMed]
Slamberova R ကို, Charousova P ကို, ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း Pometlova အမ်သမ်ဖက်တမင်းအုပ်ချုပ်ရေးမိခင်အပြုအမူချို့ယွင်း။ dev Psychobiol ။ 2005b; 46 (1): 57-65 ။ [PubMed]
Slamberova R ကို, Szilagyi B, Vathy ဗြဲထပ်ခါတစ်လဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းမိခင်အပြုအမူ attenuates ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2001; 26 (6): 565-76 ။ [PubMed]
လှံကို LP သို့ Kirstein CL, Frambes NA ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ်ကိုကင်းသက်ရောက်မှု: အပြုအမူ psychopharmacological နှင့် neurochemical လေ့လာမှုများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1989; 562: 290-307 ။ [PubMed]
Spunt B, Brownstein နာရီ, Crimmins သည် SM, Langley S က, Spanjol K. Alcohol- အမျိုးသမီးတွေကျူးလွန် related သက်ဆိုင်တဲ့။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး။ 1998; 30 (1): 33-43 ။ [PubMed]
Suchman NE, Luthar အက်စ်အက်စ်။ မိခင်စွဲ, ကလေး maladjustment နှင့်လူမှုလူဦးရေဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ: မိဘအုပ်ထိန်းအပြုအမူတွေများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 (9): 1417-28 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Surmeier DJ သမား, Ding J ကို, နေ့ M က, ဝမ် Z ကို, striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ Shen ဒဗလျူ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 228-35 ။ [PubMed]
Sutton ME, Raskin LA က။ Post-နို့ဖြတ်တဲ့ကြွက်များတွင်ကစားနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှု၏အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1986; 24 (3): 455-61 ။ [PubMed]
Tennyson VM က, Mytilineou ကို C, Barrett RE ။ အဆိုပါ substantia nigra နှင့်သန္ဓေသားယုန်အတွက်ဧရိယာ ventralis tegmenti ၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဏုလေ့လာမှုများချောင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်။ J ကို comp Neurol ။ 1973; 149 (2): 233-58 ။ [PubMed]
Testa M က, Livingston ဂျာ Leonard Ke ။ ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးသမီးများနေ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံများကို: တစ်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအကြားတစ်ဦး longitudinal စုံစမ်းစစ်ဆေး။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2003; 28 (9): 1649-64 ။ [PubMed]
သီရဲလ် KJ, Sanabria က F, Neisewander JL ။ ဆယ်ကျော်သက်အထီးကြွက်များတွင်နီကိုတင်းနှင့်လူမှုရေးဆုလာဘ်များအကြားများ၏ညှိနှိုင်းအပြန်အလှန်။ Psychopharmacology ။ 2009; 204 (3): 391-402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သောမတ်စ် MJ, Kalivas PW, Shaham Y. Neuroplasticity အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်ကိုကင်းစွဲပါ။ br J ကို Pharmacol ။ 2008; 154 (2): 327-42 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tidey JW, Miczek Ka ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကရန်လိုသည့်အပြုအမူကြီးထွား: D-စိတ်ကြွဆေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 1992a; 107 (2-3): 297-302 ။ [PubMed]
Tidey JW, Miczek Ka ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာကျူးကျော်: D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor agonists နှင့်အတူပြုပြင်မွမ်းမံ။ Psychopharmacology ။ 1992b; 108 (1-2): 177-84 ။ [PubMed]
Trezza V ကို, Baarendse PJ, Vanderschuren LJ ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dissociable neurobehavioral ယန္တရားများမှတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်းနှင့်အီသနော၏ Prosocial ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34 (12): 2560-73 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဗန် der Veen R ကို, Koehl M က, Abrous DN, က de Kloet ER, Piazza PV, Deroche-Gamonet V. မိခင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ် genotype-မှီခိုထုံးစံ၌လူကြီးအတွက်ကင်းစားသုံးမှုသြဇာလွှမ်းမိုး။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2008;3(5): e2245 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vanderschuren LJ, Niesink RJ, Spruijt BM, ဗန် Ree JM ။ လူငယ်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးပြဇာတ်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်အပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 1995a; 117 (2): 225-31 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJ, Niesink RJ, ဗန် Ree JM ။ ကြွက်များတွင်လူမှုရေးကစားအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1997; 21 (3): 309-26 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJ, Spruijt BM, Hol T က, Niesink RJ, ဗန် Ree JM ။ လူငယ်ကြွက်များတွင်လူမှုရေးကစားအပြုအမူ၏ sequential ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: မော်ဖင်းအကိုက်ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1995b; 72 (1-2): 89-95 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJ, Trezza V ကို, Griffioen-Roose S က, Schiepers OJ, ဗန် Leeuwen N ကို, De Vries တီဂျေ, Schoffelmeer AN ။ Methylphenidate ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လူမှုရေးကစားအပြုအမူ disrupts ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33 (12): 2946-56 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vazquez V ကို, Giros B, Dauge V. မိခင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အထူးသ opiate မှီခိုဖို့အားနည်းချက်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2006; 17 (8): 715-24 ။ [PubMed]
Veenema AH ။ ငယ်ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, ကျူးကျော်ခြင်းနှင့် neuroendocrine နှင့် neurobiological ဆက်စပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်သင်ယူနိုင်သလဲ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2009; 30: 497-518 ။ [PubMed]
Vernotica EM, Lisciotto, CA, Rosenblatt JS, Morrell JI ။ ကိုကင်းယာယီကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူချို့ယွင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1996; 110 (2): 315-23 ။ [PubMed]
Vernotica EM, Rosenblatt JS, Morrell JI ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာသို့မဟုတ်နျူကလိယသို့ကင်း၏ Microinfusion ယာယီကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူချို့ယွင်း accumbens ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113 (2): 377-90 ။ [PubMed]
Walsh က C, Macmillan HL, Jamieson အီးမိဘပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ကလေးတို့ကိုမတရားသဖွငျ့အကြားဆက်ဆံရေး: အအွန်ကနျြးမာရေးဖြည့်စွက်ခြင်းမှတွေ့ရှိချက်များကို။ ကလေးသူငယ် Negl အလွဲသုံးစားပြုမှု။ 2003; 27 (12): 1409-25 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Hulihan တီဂျေ, Insel TR ။ လိင်နှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအပြုအမူနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အာရုံကြော activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1997a; 767: 321-32 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, ယု, G, Cascio ကို C, လျူ Y ကို, Gingrich B, Insel TR ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113 (3): 602-11 ။ [PubMed]
Wansaw အမတ်, Pereira M က, Morrell JI ။ အဆိုပါနို့တိုက်ကြွက်များတွင်မိခင်လှုံ့ဆျောမှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ: အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင်တုံ့ပြန်မှုအကြားခြားနားနေသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2008; 54 (2): 294-301 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weatherby NL, Shultz JM, Chitwood DD, McCoy HV, McCoy သမဝါယမ, Ludwig DD, Edlin BR ။ မိုင်ယာမီဖလော်ရီဒါအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်လိင်လှုပ်ရှားမှု Crack ။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး။ 1992; 24 (4): 373-80 ။ [PubMed]
White က FJ, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် Neuroadaptations ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998; 51 (1-2): 141-53 ။ [PubMed]
Widom CS, အိုင်ယာလန် T က, Glynn PJ ။ နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်လျစ်လျူရှုကလေးငယ်များအတွက်အရက်အလွဲသုံးစားမှုနောက်တော်သို့လိုက်-Up: သူတို့တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာရှိပါသလဲ J ကိုလုံးအရက်။ 1995; 56 (2): 207-17 ။ [PubMed]
Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး (Microtus ochrogaster): လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1992; 26 (3): 339-49 ။ [PubMed]
Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365 (6446): 545-8 ။ [PubMed]
Wonnacott S က, Sidhpura N ကို, Balfour DJ သမား။ နီကိုတင်း: မော်လီကျူးယန္တရားများကနေအမူအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Curr Opin Pharmacol ။ 2005;5(1): 53-9 ။ [PubMed]
သစ်သား RD, Bannoura MD, Johanson ခလရ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကိုကင်းထိတွေ့: အလူငယ်ကြွက်များတွင်ကစားအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Neurotoxicol Teratol ။ 1994; 16 (2): 139-44 ။ [PubMed]
သစ်သား RD, Molina VA သို့, Wagner JM, လှံ LP ။ ကိုကင်းမှမွေးဖွားမီထိတွေ့ periadolescent သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု Response Play ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1995; 52 (2): 367-74 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ Ka, လျူ Y ကို, ဝမ် Z. လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology: အပြုအမူ neuroanatomical နှင့် neurochemical လေ့လာမှုများမှတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်နည်း။ comp ထဲကဓာတုပစ်စညျး Physiol ကို C Toxicol Pharmacol ။ 2008a; 148 (4): 401-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လူငယ်တို့ Ka, လျူ Y ကို, ဝမ် ZX ။ mesolimbic dopamine များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု: စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့လုပ်ကွက် monogamous အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေး Bond ထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ neuroscience ABS တင်ပြနံပါတ် 2972 2008b များအတွက် Soc
Zimmerberg B, Grey ကက MS ။ ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူတွေအပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1992; 52 (2): 379-84 ။ [PubMed]